လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒများ၏အာရုံကြောအလွှာများသည်ပြHyနာရှိသောလိင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများနှင့်အတူ (၂၀၁၅) - သင်၏ ဦး နှောက်သည် Porn တွင်ရှိသည်။
comments: ဒီကိုရီးယား fMRI လေ့လာမှု porn အသုံးပြုသူများသည်အခြားဦးနှောက်လေ့လာမှုများ replicates ။ အဆိုပါကင်းဘရစ်တက္ကသိုလ်ကလိုပဲကမူးယစ်ဆေးစွဲများ၏ပုံစံများထင်ဟပ်ထားတဲ့လိင်စွဲအတွက် cue-သွေးဆောင်ဦးနှောက်ကို Activation ပုံစံများကိုတွေ့ရှိခဲ့လေ့လာတယျ။ အတော်ကြာဂျာမန်လေ့လာမှုများနှင့်အတူလိုင်းထဲမှာမူးယစ်ဆေးစွဲလေ့လာပြောင်းလဲမှုများကိုက်ညီသော prefrontal cortex မြားတှငျပွောငျးလဲတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
တခြားလေ့လာမှုရှုထောင့် replicates နေစဉ်, ဒီကိုရီးယားစက္ကူကိုလည်းအောက်ပါဖြည့်စွက်:
ဒါဟာ cue-သွေးဆောင် reactivity ကိုပါဝင်ပတ်သက်နောက်ထပ်ဦးနှောက်ဒေသများဆန်းစစ်အပေါင်းတို့နှင့်တကွ, ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုထက်ဝေး သာ. ကြီးမြတ်ပြင်းထန်မှုနှင့်အတူတုံ့ပြန်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အပိုဆောင်းဦးနှောက်ဒေသများ: thalamus, လက်ဝဲ caudate နျူကလိယ, ညာ supramarginal gyrus နှင့်ညာဘက် dorsal anterior cingulate gyrus ။
အသစ်သောအရာမှာတွေ့ရှိချက်များသည်မူးယစ်ဆေးစွဲသူများတွင်တွေ့ရသော prefrontal cortex ပုံစံများနှင့်လုံးဝကိုက်ညီမှုရှိသည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်များကိုပိုမိုကောင်းမွန်သည့်တုန့်ပြန်မှု၊ စွဲလမ်းသူတစ် ဦး အနေဖြင့်စွဲလမ်းမှုနှင့်သက်ဆိုင်သောအချက်များအရဆုလိုင်း circuit ကို“ go get it” အချက်အလက်များဖြင့်ပေါက်ကွဲခြင်း prefrontal cortex ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ပုံမှန်နေ့စဉ်ဆုများကြောင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုနည်းပါးစေသည်။ ဆိုလိုသည်မှာသာမန်ဆုလာဘ်ကိုလိုက်စားရန်လှုံ့ဆော်မှုနည်းသည်။
တပ်ဦး။ ပြုမူနေ။ neuroscience ။ , 30 နိုဝင်ဘာလ 2015
ဂျီဝူး Seok နှင့် Jin-ဟွန် Sohn*
စိတ်ပညာဌာန, ဦးနှောက်သုတေသနအင်စတီကျု, Chungnam အမျိုးသားတက္ကသိုလ်, Daejeon, တောင်ကိုရီးယား
hypersexual disorder နှင့်အတူတစ် ဦး ချင်းစီ၏ဝိသေသလက္ခဏာများအပေါ်လေ့လာမှုများပြproblemနာ hypersexual အပြုအမူ (PHB) နှင့်ပတ်သက်။ ပိုမိုစိုးရိမ်ပူပန်မှုများကြောင့်စုဆောင်းနေကြသည်။ လက်ရှိတွင်လိင်ဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ၏အခြေခံအပြုအမူနှင့်အာရုံကြောဆိုင်ရာယန္တရားများအကြောင်းကိုအနည်းငယ်သာသိရှိထားကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏လေ့လာမှုသည်အဖြစ်အပျက်နှင့်သက်ဆိုင်သောအလုပ်လုပ်သောသံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ် (fMRI) နှင့်လိင်ဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ၏အာရုံကြောဆက်စပ်မှုများကိုစုံစမ်းရန်ရည်ရွယ်သည်။ PHB နှင့်အသက် ၂၁ နှစ်အရွယ်ရှိကျန်းမာသန်စွမ်းသောထိန်းချုပ်မှု ၂၂ ခုနှင့်လိင်နှင့်လိင်မဆိုင်သောလှုံ့ဆော်မှုများကိုသာကြည့်ရှုစစ်ဆေးစဉ်လူ ၂၃ ယောက်ကိုစစ်ဆေးခဲ့သည်။ လိင်မှုဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုချင်းစီကိုတုန့်ပြန်သည့်အနေဖြင့်ဘာသာရပ်များ၏လိင်ဆန္ဒကိုအဆင့်အတန်းခွဲခြားသတ်မှတ်ခဲ့သည်။ ထိန်းချုပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် PHB ရှိသူများသည်လိင်စိတ်လှုံ့ဆော်မှုများနှင့်လိင်ဆက်ဆံလိုသောဆန္ဒပြင်းပြမှုပိုမိုများပြားလာသည်။ ပိုမိုတက်ကြွစွာတက်ကြွစွာလုပ်ဆောင်ခြင်းသည် PHB အုပ်စုအတွင်းရှိ caudate နျူကလိယ၊ ယုတ်ညံ့ parietal ပေါ်၌ရှိသောအမြှေး၊ dorsal anterior cingulate gyrus, thalamus နှင့် dorsolateral prefrontal cortex တို့တွင်တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ထို့အပြင် activated ဒေသများရှိ hemodynamic ပုံစံများအုပ်စုများအကြားကွဲပြားပါတယ်။ ပစ္စည်းနှင့်အမူအကျင့်စွဲမှုတို့၏ ဦး နှောက်ပုံရိပ်လေ့လာမှု၏တွေ့ရှိချက်များနှင့်အညီ၊ PHB ၏အမူအကျင့်ဆိုင်ရာလက္ခဏာများနှင့်ပိုမိုမြင့်မားသောဆန္ဒရှိမှုသည် prefrontal cortex နှင့် subcortical ဒေသများတွင်ပြောင်းလဲခြင်းကိုပြသခဲ့သည်။ နိဂုံးချုပ်အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်သည် PHB နှင့်အတူတစ် ဦး ချင်းစီ၏အပြုအမူများနှင့်ဆက်စပ်အာရုံကြောယန္တရားများကိုသွင်ပြင်လက္ခဏာများကိုကူညီလိမ့်မည်။
ပြဿနာ hypersexual အပြုအမူ (PHB) ကိုဆက်စပ်အနုတ်လက္ခဏာရလဒ်များ (များ၏အသိအမြင်ရှိနေသော်လည်းအလွန်အကျွံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive နှင့်အပြုအမူကျော်မျှထိန်းချုပ်မှုတွေနဲ့အကြိမ်ကြိမ်လိင်အပြုအမူအတွက်စဉ်ဆက်မပြတ်ပါဝင်မှုအဖြစ်သတ်မှတ်တာဖြစ်ပါတယ်Goodman, 1993; Carnes, 2001, 2013) ။ PHB ထံမှခံရသူများသည်၎င်းတို့၏မိသားစုဆက်ဆံရေးနှင့်အလုပ်အကိုင်စွမ်းဆောင်ရည်အတွက်အစွန်းရောက်အခက်အခဲများတွေ့ကြုံခံစားနိုင်ပါတယ်။ ထို့ပြင်၎င်းတို့သည်လိင်မှတဆင့်ကူးစက်သောရောဂါများစာချုပ်ချုပ်သို့မဟုတ်ကရာလိင်ဆက်ဆံခြင်း (ထံမှမလိုချင်တဲ့ကိုယ်ဝန်ကြုံနေရအဘို့ သာ. ကြီးမြတ်အန္တရာယ်မှာSchneider နှင့် Schneider, 1991; Kuzma နှင့်အမဲရောင်, 2008) ။ အမေရိကန်မှာတော့ရပ်ရွာများနှင့်ကောလိပ်ကျောင်းသား၏ 3-6% (PHB ရှိColeman, 1992; အနက်ရောင်, 2000; Seegers, 2003) ။ ကိုရီးယားမှာတော့အားလုံးကောလိပ်ကျောင်းသားများခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 2% (PHB ရှိကင်မ်နှင့် Kwak, 2011) ။ PHB ၏ဖြစ်ပွားမှုကြီးထွားလာခံရဖို့ပေါ်လာတဲ့အဖြစ်ကြောင့်၎င်း၏အမြင့်ဆုံးပျံ့နှံ့ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်ပြဿနာများငှါ, ဆက်စပ်နေသောအန္တရာယ်များကို ပို. ပို. လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းအသိအမှတ်ပြုကြသည်။
PHB ၏လေးနက်မှုယခုအသိအမှတ်ပြုပေမဲ့, က (ထို DSM-5 တွင်ထည့်သွင်းမခံခဲ့ရAmerican Psychiatric Association, 2013) ဆွေးနွေးငြင်းခုံမှုများ hypersexual ရောဂါရောဂါအဖြစ်ခွဲခြားထားရမည်ရှိမရှိအဖြစ်ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောပါ၏ ထို့ကြောင့်၎င်း၏ချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်, ခွဲခြားခြင်းသို့မဟုတ်ရောဂါရှာဖွေစံမများသဘောတူညီမှုလည်းမရှိ။ ဤသည်တို့ကြောင့် hypersexuality ရောဂါနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အချက်များပေါ်တွင်ရည်ရွယ်ချက်နှင့်ပင်ကိုယ်မူလလေ့လာမှုမရှိခြင်းဖို့ရှင်းလင်းစွာခွဲခြားစံထူထောင်အတွက်အခက်အခဲများထင်ဟပ်။
တစ်ဦးရောဂါအဖြစ် PHB ၏ခွဲခြားတုန်းပဲအငြင်းပွားစရာဖြစ်သော်လည်းကြောင့် PHB စွဲ၏အခြားပုံစံများ (ဆင်တူဖြစ်ကြောင်းလက္ခဏာတွေလည်းပါဝင်သည်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အလွန်အကျွံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုစွဲလမ်းမမှန်တစ်ကဏ္ဍအဖြစ်ခွဲခြားသင့်ကြောင်းအဆိုပြုပြီးပါပြီGoodman, 2001; Kor et al ။ , 2013) ။ Enhanced အလိုဆန္ဒစွဲလမ်းမမှန်၏ဆေးခန်းသက်ဆိုင်ရာရှုထောင့်မှပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆက်စပ်ဖြစ်ပါတယ်။ imaging လေ့လာမှုများ (အလိုဆန္ဒအတွက်ပါဝင်ပတ်သက်သည်ဟုဦးနှောက်တိုင်းဒေသကြီးများ၏ function ကိုပစ္စည်းဥစ္စာစွဲရှိသူများအတွက်ပြောင်းလဲကြောင်းပြသကြGaravan et al ။ , 2000; Tapert et al ။ , 2003; Franklin et al ။ , 2007;McClernon et al ။ , 2009) ။ မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏တိုက်ရိုက်စားသုံးမှုပါဝင်ပါဘူးထိုကဲ့သို့သောလောင်းကစားဝိုင်း, အင်တာနက်ဂိမ်းကစားများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအဖြစ်အမူအကျင့်စှဲ, အစ (သက်ဆိုင်ရာဦးနှောက်ဒေသများတွင်ပြောင်းလဲလုပ်ဆောင်ချက်များကိုနှင့်ဆက်စပ်သောခံရဖို့ပုံရသည်တဲ့မြင့်အလိုဆန္ဒပါဝင်ပတ်သက်နေCrockford et al ။ , 2005; ko et al ။ , 2009;Kühnနှင့် Gallinat, 2014; Voon et al ။ , 2014).
ပစ္စည်းဥစ္စာစွဲများနှင့်အမူအကျင့်စွဲအတွက်အလိုဆန္ဒ၏ဦးနှောက်ပုံရိပ်လေ့လာမှုများ (ဤရောဂါနှင့်အတူဘာသာရပ်များအတွက်အလုပ်လုပ်တဲ့အတွက် prefrontal cortex (PFC) တွင်အပြောင်းအလဲများနှင့် subcortical ဆုလာဘ်ဆားကစ်ပြခဲ့ကြစတိန်းနှင့် Volkow, 2011) ။ အထူးသဖြင့်ဤလေ့လာမှုများနှစ်ဦးစလုံး limbic ဆုလာဘ်ဒေသများနှင့်ထပ်တလဲလဲပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုခြင်းနှင့်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောအပြုအမူများ၏စိတ်ခွန်အားနိုးရှုထောင့်တွင်၎င်း၏ပါဝင်ပတ်သက်မှု၎င်း၏စည်းမျဉ်းအားဖြင့်စွဲလမ်းအတွက် PFC ၏သော့ပါဝင်ပတ်သက်မှုဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါ PFC များ၏နှောင့်အယှက်လုပ်ငန်းဆောင်တာထိုကဲ့သို့သောပစ္စည်းဥစ္စာများနှင့်စွဲအပြုအမူတွေထဲမှာရှိသကဲ့သို့တစ်ဦးစွဲလမ်း cue, နှင့်ပုံမှန်ကြိုးလှုံ့ဆော်မှုများအတွက်လျော့နည်းသွားအလိုဆန္ဒ (မှတငျထားအလွန်အကျွံ salience များ၏ထည့်သွင်းတွက်ချက်မှုအဖြစ်တုန့်ပြန်တားစီးနှင့် salience ထည့်သွင်းတွက်ချက်မှုများတွင်ချို့ယွင်းမှဦးဆောင်Goldman-Rakic ​​နှင့်ဟောင်ကောင်, 2002; စတိန်းနှင့် Volkow, 2011).
ဤအရလဒ်များကိုနှင့်အတူတသမတ်တည်း, PHBs အပေါ်တစ်ဦး neuroimaging လေ့လာမှု၏ရလဒ်များကို PHBs နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုနှင့်မြှင့်တင်ရန်ဆန္ဒ dorsal anterior cingulate-ventral striatal-amygdala အတွက်အာရုံကြောတုံ့ပြန်မှုအမျိုးမျိုးပုံစံများနှင့်ဆက်စပ်ကြောင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် သာ. ကြီးမြတ်ပုဂ္ဂလဒိဋ္လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒရှိကြောင်းအကြံပြု အလုပ်လုပ်တဲ့ကွန်ရက် (Voon et al ။ , 2014) ။ တစ်ဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှုလေ့လာမှု၌, Kühnနှင့် Gallinat (2014) မကြာခဏညစ်ညမ်းထိတွေ့ PFC ဒေသများရှိပြောင်းလဲဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေနဲ့ဆက်စပ်နေသည်နှင့်ဝတ္ထုနှင့်ပိုပြီးအစွန်းရောက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းကိုရှာဖွေတဲ့သဘောထားကိုဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြအံ့သောငှါသရုပ်ပြခဲ့သည်။
ဒီလေ့လာမှုတွေအလိုဆန္ဒကြီးထွားခြင်းနှင့်အလိုဆန္ဒအတွက်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရသည့်အလုပ်လုပ်တဲ့မူမမှန်အပြုအမူသူ့ဟာသူ neurotoxic သက်ရောက်မှုသွေးဆောင်ပါဘူးသော်လည်းကိုလည်း PHB အတွက်ပါဝင်ပတ်သက်ဖြစ်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားသည်။
ကံမကောင်းစွာပဲ PHB နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ-ဆက်စပ်အာရုံကြောတုံ့ပြန်မှုအပေါ်ပင်ကိုယ်မူလဒေတာမလုံလောက်ဖြစ်ကြသည်။ PHB နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ၏အပြောင်းအလဲနဲ့အခြေခံဦးနှောက်ယန္တရားအပေါ်ယခင်လေ့လာမှုများအလုပ်လုပ်တဲ့သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ် (fMRI) နှင့်ခေါ်ဆောင်သွားလှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုအတော်လေးအချိန်ကြာမြင့်စွာထိတွေ့နေစဉ်အတွင်းသမားရိုးကျပိတ်ပင်တားဆီးမှု Paradigm အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ၏လေ့လာမှုများမှာတင်ဆက်ကြာချိန်အမြင်တစ်ခုအတိုင်းအတာများအမှတ်ထံမှအရေးကြီးသောဖြစ်ပေါ်လာသောကြောင့်သတင်းအချက်အလက်အပြောင်းအလဲနဲ့အတွက်ခြားနားချက်များ (Bühler et al ။ , 2008) ။ ပိတ်ပင်တားဆီးမှုဒီဇိုင်းများများတွင်လှုံ့ဆော်မှုတင်ဆက်မှုများ၏ကြာချိန် (တာရှညျနှင့်ပိတ်ပင်တားဆီးမှုအတွက်စဉ်ဆက်မပြတ်လှုံ့ဆော်မှုများ၏ဖြစ်ပျက်မှုလုံးဝကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းဖြစ်ပါသည်Zarahn et al ။ , 1997). ထို့ကြောင့်, ပိတ်ပင်တားဆီးမှုဒီဇိုင်းများဖွယ်ရှိထိုကဲ့သို့သောထောကျအာရုံစူးစိုက်မှုကိုထိပ်တန်း-Down ထိန်းချုပ်မှုနှင့်လိင်စိတ်နိုးထ၏တားစီးအဖြစ်သိမြင်မှုဖြစ်စဉ်များနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသောဒေသများ, ကိုသက်ဝင်. ဤသည်ကိုလျှော့ချစိတ်ခံစားမှုပါဝင်ပတ်သက်မှုဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြထို့ကြောင့်နောက်ခံအာရုံကြောလှုပ်ရှားမှုပြောင်းလဲသွားနိုင် (Schafer et al ။ , 2005). သူတို့ hemodynamic တုံ့ပြန်မှု function ကိုခန့်မှန်းဘို့ထက်သာလွန်နေအတိုင်းအတာများ, အဖြစ်အပျက်-related ဒီဇိုင်းများ, activated ဦးနှောက်ဒေသများဖော်ထုတ်မယ်များအတွက်သမားရိုးကျပိတ်ပင်တားဆီးမှုဒီဇိုင်းများယုတ်ညံ့များမှာ (Birn et al ။ , 2002).
(1) PHBs နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအတွက်ကြီးထွားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ၏ယခင်အမူအကျင့်တွေ့ရှိချက်ပုံတူပွား,
(2) တိုးမြှင်အလိုဆန္ဒနှင့်ဆက်စပ်ခံရဖို့လူသိများဒေသများတွင်ဦးနှောက် function ကိုအတွက်အပြောင်းအလဲများကိုဖော်ထုတ်ရန်နှင့်
(3) ဖြစ်ရပ်-ဆက်စပ် fMRI အသုံးပြု. PHBs နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအတွက်အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှသူတို့အဦးနှောက်ဒေသများ၏ hemodynamic တုံ့ပြန်မှုအတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုနားလည်ပါတယ်။
ကျနော်တို့ PHBs နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် သာ. ကြီးမြတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒပြသဖို့ပိုများပါတယ်နှင့်ထိုကဲ့သို့သော PFC နှင့် subcortical ဆုလာဘ်ဆားကစ်ကြောင့်ဦးနှောက်ဒေသများ, ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါပြောင်းလဲလှုပ်ရှားမှုနဲ့ hemodynamic တုံ့ပြန်မှုပြသသောတွေးဆ။
ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုပါဝင်သည် အဆိုပါ PHB အုပ်စု 23 လိင်ကွဲအထီးသင်တန်းသားများကို [= 26.12 နှစ်ပေါင်းအသက်အရွယ် = 4.11, စံသွေဖည်မှု (SD) ကိုဆိုလိုတာ] နှင့်ထိန်းချုပ်မှုအုပ်စု 22 လိင်ကွဲအထီးသင်တန်းသားများကို (အသက် = 26.27 ဆိုလို, SD = 3.39 နှစ်). ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 70 အလားအလာသင်တန်းသားများကိုပြဿနာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်လိင်စွဲလမ်းအမည်မသိအစည်းအဝေးများများအတွက်ကုသမှုအဆောက်အဦကနေစုဆောင်းခဲ့ကြ။ အဆိုပါပါဝင်စံယခင်လေ့လာမှုများ (စားပွဲတင် S1 ၏ PHB အဖြေရှာတဲ့စံပေါ်တွင်အခြေခံကြသည် ဟူ. ၎င်း, Carnes et al ။ , 2010; Kafka, 2010). Tသူကဖယ်စံ 45 ကျော်သို့မဟုတ် 18 အောက်မှာအသက်; အောက်ပါခဲ့ကြသည် ထိုကဲ့သို့သောအရက်သုံးစွဲခြင်းရောဂါ, လောင်းကစားရောဂါအဓိကစိတ်ကျရောဂါရောဂါ, စိတ်ကြွရောဂါ, ဒါမှမဟုတ် obsessive-compulsive ရောဂါအဖြစ်အလေးအနက်စိတ်ရောဂါရောဂါ, လက်ရှိဆေးဝါးယူပြီး; လေးနက်သောဦးခေါင်းဒဏ်ရာတစ်ခုသမိုင်း; လိင်တူဆက်ဆံခြင်း; ရာဇဝတ်သားစံချိန်; သို့မဟုတ်ပုံရိပ်များအတွက်အရည်အချင်းမပြည့်မှီ (ဆိုလိုသည်မှာသူ့ခန္ဓာကိုယ်, ပြင်းထန် astigmatism, ဒါမှမဟုတ် claustrophobia အတွက်သတ္တုရှိခြင်း) ။ အဆိုပါ Clinician အလားအလာဘာသာရပ်များအားလုံး၏လက်တွေ့အင်တာဗျူးကောက်ယူလျက်, ပါဝင်စံမဖယ်စံတွေ့ဆုံခဲ့သူကို 23 ယောက်ျားတစ်ဦးရဲ့နောက်ဆုံးအဖွဲ့ PHB အုပ်စုမရွေးခဲ့ကြသည်။ ထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုတစ်စုအဘို့, PHB အုပ်စုတစ်စုလိုက်ဖက်ကြောင်းလူဦးရေဆိုင်ရာသွင်ပြင်လက္ခဏာများ (အသက်, ကျား, မ, ပညာရေးအဆငျ့နှင့်ဝင်ငွေအဆင့်) နှင့်အတူ 22 သင်တန်းသားများကိုရှေးခယျြခဲ့သညျ။ ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုရဲ့ contents သူတို့ကိုရှင်းပြခဲ့ကြပြီးနောက်သင်တန်းသားများအားလုံးတိကျမ်းစာ၌လာသည်အကြောင်းကြားသဘောတူညီချက်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ Chungnam အမျိုးသားတက္ကသိုလ် Institutional ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းဘုတ်အဖွဲ့စမ်းသပ်နှင့်သဘောတူညီခကျြလုပျထုံးလုပျနညျး (201309-SB-003-01 ခွင့်ပြုချက်နံပါတ်) အတည်ပြုခဲ့သည်။ သင်တန်းသားများကိုအားလုံး၎င်းတို့၏ပါဝင်မှုများအတွက်ဘဏ္ဍာရေးလျော်ကြေး (150 ဒေါ်လာ) ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။
သင်တန်းသားများကိုယခင်6လနှင့်ထိုသို့သော Barratt Impulse စကေး-11 အဖြစ်စံချိန်စံညွှန်းမီအကြေးခွံ, (အဘို့မိမိတို့လူဦးရေဆိုင်ရာဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများအပေါ်မေးခွန်းများကိုင်တစ်ဦးစစ်တမ်းပြီးစီးPatton et al ။ , 1995), Buss-ပယ်ရီကျူးကျော်မေးခွန်းလွှာ (Buss နှင့်ပယ်ရီ, 1992), Beck စီးပွားပျက်ကပ် Inventory (Beck et al ။ , 1996), Beck တော့ပူပန် Inventory (Beck et al ။ , 1996), စမ်းသပ်ခြင်း-R ကို (SAST-R ကိုပြလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲ; Carnes et al ။ , 2010), နှင့် Hypersexual အပြုအမူ Inventory (HBI; ရိဒ် et al ။ , 2011; စားပှဲ 1) ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ်မေးခွန်းများကိုပထမဦးဆုံးလိင်ဆက်ဆံနှင့်လက်ရှိလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကြားဆက်ဆံရေးအဆင့်အတန်းအသက်အရွယ်ရှိကြ၏။ တစ်ဦး သီးသန့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခွအေန နှစ်ခုသာတစ်ဦးချင်းစီကိုသီးသန့်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားတွေနဲ့လိင်ဆက်ဆံအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံရသောဆက်ဆံရေးအဖြစ်သတ်မှတ်ခံခဲ့ရသည်။ တစ်ဦးက nonexclusive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကြားဆက်ဆံရေး ထိုဆက်ဆံရေးအတွက်ရင်းနှီးမှုမဆိုမျိုးကိုထိန်းသိမ်းထားခြင်းမရှိဘဲအတော်ကြာကွဲပြားခြားနားသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိတ်ဖက်နှင့်အတူမျိုးစုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်ဆံရေး၏ထိန်းသိမ်းခြင်းအဖြစ်သတ်မှတ်ခံခဲ့ရသည်။
စားပွဲတင် 1 ။ ဘာသာရပ်ဝိသေသလက္ခဏာများ.
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှု-related ဝိသေသလက္ခဏာများပေါ်မေးခွန်းများကိုတစ်ပတ်ကိုလိင်ဆက်ဆံခြင်း၏ကြိမ်နှုန်း, တစ်ပတ်ကိုတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ၏ကြိမ်နှုန်း, တစ်ပတ်ကိုညစ်ညမ်းကြည့်ရှု၏ကြိမ်နှုန်းနှင့်အတိတ်6လအတွင်းစုစုပေါင်းလိင်ဆက်ဆံဖက်၏နံပါတ်ထည့်သွင်း. ထို့ပြင် SAST-R ကို (Carnes et al ။ , 2010) နှင့် HBI (ရိဒ် et al ။ , 2011) သင်တန်းသားများအတွက် PHB ၏ဘွဲ့အကဲဖြတ်ရန်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါ SAST-R ကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲ၏ဘွဲ့အကဲဖြတ်ရန်ဒီဇိုင်း 20 မေးခွန်းများကိုပါဝင်ပါသည်။ အဆိုပါရမှတ်ပိုပြီးပြင်းထန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲညွှန်းမြင့်မားတဲ့ရမှတ်များနှင့်အတူ,0ထံမှ 20 အချက်များမှနေကြပါတယ်။ အဆိုပါ HBI 19 မေးခွန်းတွေဖွဲ့စည်းနှင့်ရမှတ် 19 ထံမှ 95 ဖို့နေကြပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးကစုစုပေါင်း 53 ၏ရမှတ်သို့မဟုတ်ပိုမိုမြင့်မားတဲ့ hypersexual ရောဂါပြဖြစ်ပါသည်။ SAST-R နှင့် HBI ၏အတွင်းပိုင်းရှေ့နောက်ညီညွတ်မှု (Cronbach ၏αမြှောက်ဖော်ကိန်း) သည် ၀.၉၁ နှင့် ၀.၉၆ အသီးသီးရှိသည်။Carnes et al ။ , 2010; ရိဒ် et al ။ , 2011).
တစ်ဦးက prestudy အဆိုပါ fMRI လေ့လာမှု (S130 File) အတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် nonsexual လှုံ့ဆော်မှုကို select နိုင်ရန်အတွက် fMRI စမ်းသပ်မှုတွင်ပါဝင်ဘူးသူကိုသာမန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေနဲ့ 1 ယောက်ျားအပေါ်ကောက်ယူခဲ့သည်။ အဆိုပါအမြင်အာရုံလှုံ့ဆော်မှုနိုင်ငံတကာကိုထိခိုက်ရုပ်ပုံစနစ် (20 ဓာတ်ပုံများထံမှကောက်ယူခဲ့6ဓါတ်ပုံများ၏ပါဝင်သည်; lang et al ။ , 2008) နှင့်အင်တာနက်ဝက်ဘ်ဆိုက်များ (14 ဓာတ်ပုံများ) ။ အဆိုပါလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုအဝတ်အချည်းစည်းအမျိုးသမီးများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုသရုပ်ဖော်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေပါဝင်သည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, မဆိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒသွေးဆောင်မ 20 ဓာတ်ပုံများအဆိုပါ nonsexual လှုံ့ဆော်မှုအဖြစ်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရသည်။ သူတို့ဟာသာယာသောသူတို့ရဲ့အဆင့်ကိုများအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုနှင့်အတူလိုက်ဖက်ခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါ nonsexual လှုံ့ဆော်မှုထိုကဲ့သို့သောရေအားကစားလှုပ်ရှားမှုများ, တစ်ဦးအနိုင်ရတဲ့အောင်ပွဲ၏အခမ်းအနားနှင့်နှင်းလျှောစီးအဖြစ်အလွန်အမင်းနှိုးဆွသောမြင်ကွင်းများ, ပြသ။ ဤရွေ့ကားလှုံ့ဆော်မှုသာယာသောနှင့်အထွေထွေ arousal ၏ခံစားချက်များကိုအနေဖြင့်ရလဒ်ကြောင့်လှုပ်ရှားမှုအထဲကအာဏာရနေဖြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒမှတစ်ခုတည်းကိုသာဆက်စပ်ခဲ့သောဦးနှောက်လှုပ်ရှားမှုကိုဖေါ်ထုတ်နိုင်ရန်အတွက်ရှေးခယျြခဲ့သညျ။
အဆိုပါ fMRI စမ်းသပ်ပါရာဒိုင်းအဘို့, စမ်းသပ်မှုအကြောင်းကိုအကျဉ်းညွှန်ကြားချက်စမ်းသပ်မှုရဲ့အစမှာ6s အတွက်ပေးခဲ့, အရာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ် nonsexual ဖြစ်စေလှုံ့ဆော်မှုများ၏ကျပန်းတင်ဆက်မှုအားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်ခဲ့သည်5s ကိုအသီးအသီးအဘို့. တစ်ခုချင်းစီကို interstimulus ကြားကာလဟာသူတို့ရဲ့အခြေခံပြည်နယ်သို့ပြန်လာနိုင်ရန်ပါဝင်သူကိုကူညီ 7-13 s ကို (ပျှမ်းမျှ, 10 s) ကိုဖြစ်ခဲ့သည်။ ယင်းလှုံ့ဆော်မှုအပေါ်အာရုံစူးစိုက်သင်တန်းသားများကိုစောင့်ရှောက်ရန်, သူတို့ကမမျှော်လင့်တဲ့ပစ်မှတ်မဆိုကြားကာလအတွင်းမှာ 500 အကြိမ်စုစုပေါင်းခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 12 ms များအတွက်တင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်အခါတုံ့ပြန်မှုခလုတ်ကိုနှိပ်ဖို့တောင်းခံခဲ့ရသည်။ အဆိုပါစမ်းသပ်မှုများအတွက်လိုအပ်သောစုစုပေါင်းအချိန် 8 မိနှင့် 48 s ကို (ပုံခဲ့တယ် 1).
ပုံ 1 ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒများအတွက်အဖြစ်အပျက်-related ပါရာဒိုင်း.
အဆိုပါ fMRI စမ်းသပ်မှုပြီးသွားချိန်သင်တန်းသားများကို fMRI စမ်းသပ်မှုအတွက်ပေးအပ်ခဲ့တူညီလှုံ့ဆော်မှု watched နှင့်သူတို့တစ်တွေစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ဘို့ကအောက်ပါမေးခွန်းသုံးခုကိုတုံ့ပြန်ရန်လိုအပ်ခဲ့သည်.
ပထမဦးစွာသူတို့တစ်ဦးချင်းစီနှိုးဆွမြင်သည့်အခါသူတို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒခံစားခဲ့ရရှိမရှိဟုမေးသည့်အခါ "မ" "ဟုတ်ကဲ့" ကိုတုံ့ပြန်သို့မဟုတ်ဖို့တောင်းခံခဲ့ရသည်။
ဒုတိယအချက်မှာသူတို့ 1 (အနည်းဆုံးပြင်းထန်သော) မှ5(အများဆုံးပြင်းထန်သော) အထိငါးအချက် Likert စကေးပေါ်တွင်သူတို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒဘယ်လောက်ရှိသလဲရန်လိုအပ်ခဲ့သည်။
တတိယအချက်မှာပါဝင်သူများ၏ Valence နှင့်လှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုစီတိုင်းအတွက်နှိုးဆွမှုပမာဏအပေါ်သီးသန့်သတ်မှတ်ချက်ကို Likert စကေး (၇) ချက်နှင့်အညီဆုံးဖြတ်သည်။
နှုန်းနှစ်ခုအတိုင်းအတာအပေါ်ရေးဆွဲပြီးခဲ့ကြသည်။ အပြုသဘောသို့မဟုတ်အပျက်သဘောခဲ့သည့် valence, အရွယ်ရှိ 1 မှာအလွန်အပြုသဘောဆောင်ဖို့7မှာအလွန်အနုတ်လက္ခဏာမှ၎င်း, စိတ်ခံစားမှု arousal 1 မှာအေးဆေးတည်ငြိမ်ထံမှစိတ်လှုပ်ရှားအရွယ်ရှိ /7မှာနှိုးဆော်ခြင်း။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့သင်တန်းသားများကိုသူတို့တစ်ဦးချင်းစီနှိုးဆွဖို့သူတို့ရဲ့ထိတွေ့မှုကာလအတွင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒမှတပါးကြုံတွေ့အခြားစိတ်ခံစားမှုအစီရင်ခံရန်လိုအပ်သည်။
Image ကိုဝယ်ယူတဲ့ 3.0 T က Philips ကသံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုကင်နာ (Philips ကကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု, အကောင်းဆုံး, အဆိုပါနယ်သာလန်) နဲ့ဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်။ တစ်ဦးက Single-shot ပဲ့တင်သံ-ပြိုပုံရိပ် fMRI စကင်ဖတ်စစ်ဆေးဖို့နည်းလမ်း [ပုံရိပ် variable တွေကို: အထပ်ထပ်အချိန် (TR) = 2,000 ms, ပဲ့တင်သံအချိန် (TE) matrix ကို = 28 ×5၏လယ်ပြင်, 64 ms မရှိကွာဟမှုတွေနဲ့အချပ်အထူ = 64 မီလီမီတာ = အမြင် (FOV) = 24 × 24 စင်တီမီတာ, လှန်ထောင့် = 80 °နှင့် In-လေယာဉ် resolution ကို = 3.75 မီလီမီတာ] အသွေးတော်အောက်စီဂျင်အဆင့်ကို-မှီခို (BOLD) ရုပ်ပုံများ 35 စဉ်ဆက်မပြတ်ချပ်ဆည်းပူးဖို့အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ T1 မာန်တင်းခန္ဓာဗေဒပုံရိပ်တွေ (တစ်3ရှုထောင်အရည်-attenuation ပြောင်းပြန်လှန်ပြန်လည်နာလန်ထူ sequence ကိုနှင့်အတူရယူခဲ့ကြသည်TR = 280, TE = 14 ms, လှန်ထောင့် = 60 °, FOV = 24 × 24 စင်တီမီတာ, matrix ကို = 256 × 256 နှင့်အချပ်အထူ =4မီလီမီတာ) ။
တစ်ခုတည်းကိုသာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒအပေါ်အခြေခံခဲ့ကြသောအမူအကျင့်များနှင့်အာရုံကြောတုံ့ပြန်မှုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်နိုင်ရန်အတွက်ထိုကဲ့သို့သောရွံရှာ, အမျက်ဒေါသ, ဒါမှမဟုတ်အံ့သြစရာအဖြစ်ကတခြားစိတ်ခံစားမှု, သွေးဆောင်သောသုံးဓာတ်ပုံများကိုများအတွက်ပုံရိပ်နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအချက်အလက်များ, လိင်စိတ်နိုးထထက်အခြား data တွေကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှဖယ်ထုတ်လိုက်ခဲ့သည် ။ လွတ်လပ်သော tယင်းအုပ်စုနှစ်စုအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ၏ကြိမ်နှုန်းနှင့်ပြင်းထန်အား -tests SPSS 22 (IBM ကကော်ပိုရေးရှင်း, Armonk, နယူးယော့, USA) ကို အသုံးပြု. ဖျော်ဖြေခဲ့ကြသည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ၏ကြိမ်နှုန်းတစ်ဦးချင်းစီပါဝင်သူစုစုပေါင်း 20 လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုအထဲမှလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒကြုံတွေ့နှင့်လိင်စိတ်နိုးထများ၏ပြင်းထန်မှုဟာ 20 ခေါ်ဆောင်သွားပုံပုဂ္ဂလဒိဋ္လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ၏ပျမ်းမျှအဆင့်ဖြစ်သည့်အဘို့အလှုံ့ဆော်မှု၏နံပါတ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့ပါတယ်။
SPM8 (Imaging ကအာရုံကြောသိပ္ပံ, လန်ဒန်၏ Wellcome ဦးစီးဌာန, ဗြိတိန်) က fMRI data တွေကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖို့အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ preprocessing ဇာတ်စင်ခုနှစ်, MRI ပုံရိပ်ဝယ်ယူအောက်ပါနိုင်ရန်အတွက်ဖျော်ဖြေခဲ့သည်: ကြားညှပ်ဝယ်ယူ, ရွေ့လျားမှုဆုံးမခြင်း, နှင့် Montreal အာရုံကြောသိပ္ပံ (MNI) ကထောက်ပံ့ပေးမယ့်စံ template ကိုပေါ်သို့ Spatial ပုံမှန်အဘို့အချပ်-အချိန်ကိုက်ဆုံးမပဲ့ပြင်။ နောက်ပိုင်းတွင်အဆိုပါပုံမှန်ပုံရိပ်တွေတစ်ခု 8-မီလီမီတာ Gaussian kernel ကိုအတူပန်းခင်းလမ်းခဲ့ကြသည်။
အဆိုပါ preprocessing ပြီးသွားချိန်အခြေအနေနှစ်ခု (လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေနှင့် nonsexual ခွအေနအေ) နဲ့ဒီဇိုင်းမက်တရစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ-related activation အတူဒေသများသိရှိနိုင်ဖို့တစ်ဦးချင်းစီပါဝင်သူဖန်တီးခဲ့ကြသည်။ တစ်ဦးချင်းပထမဦးဆုံး-Level လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခွအေနေ၏နှိုင်းယှဉ်၏လေ့လာဆန်းစစ်အနုတ် nonsexual အခွအေနေတဲ့ကျပန်းသက်ရောက်မှုဆန်းစစ်များအတွက်အသုံးပြုခဲ့ကြခြင်း, ယုတ်ပုံရိပ်တွေတစ်ဦးချင်းစီဘာသာရပ်များအတွက်ဖန်တီးထားကြသည်။ one-နမူနာ tယုတ်ပုံရိပ်တွေအပေါ် -tests တစ်ဦးချင်းစီဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းအတွက်ဖန်တီးဆနျ့ကငျြဘပုံရိပ်တွေအတွက်အုပ်စုတစ်ခုချင်းစီအတွက်သိသာထင်ရှားသောအုပ်စုသည်အကျိုးသက်ရောက်မှုများအကဲဖြတ်ရန်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ Two-နမူနာ t-tests အဆိုပါ nonsexual အခွအေနေရန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခွအေနေဆွေမျိုးအတွက်ဦးနှောက်တုံ့ပြန်မှုများအတွက်အုပ်စုနှစ်စုအကြားခြားနားချက်များကိုသိရှိနိုင်ဖို့ကောက်ယူခဲ့ကြသည်။ ထို့အပြင်ဆက်စပ်ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းဟာ SAST-R ကိုအရသိရသည် hypersexuality ၏ပြင်းထန်မှုနှင့်အတူဆက်နွယ်နေကြောင်းကြောင်း activation များ၏ဒေသများတွင်ဆုံးဖြတ်ရန်သာ PHB အုပ်စုတွင်ကောက်ယူခဲ့ကြသည်။ မေးခွန်းလွှာရမှတ်၏ကှဲလှဲထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုပိုပြီးသိသိသာသာဆက်စပ်ထုတ်ဖေါ်ဖို့လည်းအနိမ့်ခဲ့ကြပါပြီစေခြင်းငှါ, သောကြောင့်, ဆက်စပ်မှုဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုတွင်ကောက်ယူမခံခဲ့ရပါ။ ဤအဆင့်ယေဘုယျအား fMRI လေ့လာမှုများအတွက်လက်ခံအဖြစ် P ကို ​​0.05 (အယူမှား Discovery နှုန်း, တညျ့, စပျစ်သီးပြွတ်အရွယ်အစား≥ 20) သို့မဟုတ် 0.001 (uncorrected, စပျစ်သီးပြွတ်အရွယ်အစား≥ 20) ထက်လျော့နည်းတန်ဖိုးထားဦးနှောက်လှုပ်ရှားမှုများအတွက်သိသာထင်ရှားသောစဉ်းစားခဲ့ကြသည်။ MNI ဇယားထဲမှာကိုသြဒိနိတ်အဖြစ် activated voxels ၏သြဒီနိတ်အားလုံးပြသနေကြသည် 3, 4.
အဆိုပါရာခိုငျနှုနျးက signal ကိုအပြောင်းအလဲအကြား-အုပ်စုတစ်စုနှင့်ဆက်စပ်မှု [ဆိုလိုသည်မှာနှစ်နိုင်ငံ thalamus, ညာ dorsolateral prefrontal cortex (DLPFC) ကိုပိုင်းခြားသုံးသပ်ပြီး, လက်ဝဲ caudate နျူကလိယ, ညာ supramarginal gyrus နှင့်ညာဘက်၏ရလဒ်များကိုအပေါ်အခြေခံပြီးအကျိုးစီးပွား (ROIs) ၏နေရာများကနေဖြည်ချ ] anterior cingulate gyrus dorsal (MarsBaR နှင့်အတူhttp://www.sourceforge.net/projects/marsbar) ။ အဆိုပါ ROIs ဇယားအစီရင်ခံကိုသြဒီနိတ်ပတ်လည် 5-မီလီမီတာစက်လုံးအားမရအသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးခဲ့ကြ 3, 4. အဆိုပါ hemodynamic တုံ့ပြန်မှုများ၏ယာယီဝိသေသလက္ခဏာများဆန်းစစ်ရန်အလို့ငှာခုနှစ်, BOLD signal ကိုအချိန်သင်တန်းကိုလည်းတစ်ခုချင်းစီကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွ၏တင်ဆက်မှုစဉ်အတွင်း ROIs ထံမှ (12 s ကိုစုစုပေါင်း;5s နှင့်7့အဲဒီနောက်) ထုတ်ယူခဲ့ပါဝင်သူအားလုံးအတှကျ။ အချိန်သင်တန်းများထို့နောက်အုပ်စုတစ်ခုချင်းစီအတွက်သင်တန်းသားများကိုဖြတ်ပြီးပျမ်းမျှခဲ့ကြသည်။
အဆိုပါဆက်စပ်မှုကိန်းတွက်ချက်ဖို့ဆက်စပ်မှုတစ်ခုနောက်ဆက်တွဲစမ်းသပ်မှုသည်အတိုင်း, SAST-R နှင့် HBI အပေါ်ရမှတ်များနှင့် ROIs အတွက်ရာခိုင်နှုန်းက signal ကိုအပြောင်းအလဲများအကြားဆက်ဆံရေးဟာဆက်စပ်မှုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ၏ရလဒ်များကိုအပေါ်အခြေခံပြီး (ဇယား 4) SPSS 22 အတူ PHB အုပ်စုဆန်းစစ်ခဲ့ကြသည်။
အဆိုပါ 20 ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုဘာသာရပ်များ၏, နှစ်ခုသာသုံးယောက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုတုံ့ပြန်လိင်စိတ်နိုးထမှတပါးအခြားအစိတ်ခံစားမှုကဖော်ပြခဲ့သည်။ ထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုတွင်အခြားပါဝင်သူတဦးတည်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပုံအံ့အားသင့်သွေးဆောင်ကြောင်း rated နေစဉ်ထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုတစ်ခုမှာပါဝင်သူအဆိုပါ 20 လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုသွေးဆောင်ရွံရှာခြင်းနှင့်အမျက်ဒေါသကြားတွင်နှစ်ခုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ လိင်စိတ်နိုးထထက်အခြားသွေးဆောင်ခံစားချက်တွေကိုဒေတာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှဖယ်ထုတ်လိုက်သောသုံးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဓာတ်ပုံများကို။
လွတ်လပ်သော t-test valence [လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုတုန့်ပြန် valence နှင့် arousal ၏ရှုထောင့်မအုပျစုကှဲပွားခွားနားညွှန်ပြ: t(43) = 0.14, p> 0.05, Cohen ကိုရဲ့d= 0.042; arousal: t(43) = 0.30,p> 0.05, Cohen ကိုရဲ့d= 0.089] ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ s ကို evoked သော 20 ခေါ်ဆောင်သွားဓာတ်ပုံများကိုအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများထို့အပြင်ရာခိုင်နှုန်းအဆိုပါ PHB အုပ်စုသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကြွဆေးထိတွေ့နေစဉ်အတွင်းပိုပြီးမကြာခဏထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုတစ်စုထက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒခံစားခဲ့ရကြောင်း howedကိုယ့် [t(43) = 3.23, p <0.01, Cohen ကိုရဲ့d= 0.960] ။ T ကသူကလိင်စိတ်နိုးထ၏ပြင်းထန်မှုဟာ PHB အုပ်စုသည်လိင်ဓါတ်ပုံကိုလှုံ့ဆော်ဖို့တုန့်ပြန်ထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုတစ်စုထက်ပိုမိုပြင်းထန်သောလိင်စိတ်နိုးထကြုံတွေ့ကြောင်းပြသ [t(43) = 14.3, p <0.001, Cohen ကိုရဲ့d= 4.26] ။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်၏ရလဒ်များကိုဇယားမှာပြနေကြသည် 2.
စားပွဲတင်2။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ရလဒ်များကို.
အဆိုပါ PHB အုပ်စု, activation နှစ်နိုင်ငံအလယ်တန်း / ယုတ်ညံ့တိုကျရိုကျ gyri [Brodmann ဧရိယာ (BA) 9] cuneus / precuneus (BA 7, 18 နှင့် 19), striatum, thalamus, နှင့် cingulate gyri (BA 24 နှင့် 32 အတွက်လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည် ) nonsexual လှုံ့ဆော်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုတုံ့ပြန်ပါတယ်။ Iဎထိန်းချုပ်မှုအုပ်စု activation နှစ်နိုင်ငံအလယ်တန်းပြသခဲ့ပါသည် / ယုတ်ညံ့တိုကျရိုကျ gyri (BA 9), cuneus / precuneus (BA 7, 18 နှင့် 19), striatum, thalamus, နှင့်လက်ဝဲ cingulate gyrus (BA 24) (အယူမှား Discovery တညျ့ နှုန်းp <0.05) ။
နှစ်နိုင်ငံ thalami, လက်ဝဲ caudate နျူကလိယ, ညာ DLPFC ၏အကြား-အုပ်စုကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခုနှစ်, PHB အုပ်စုကိုညာဖက် dorsal anterior cingulate cortex (BA 24 နှင့် 32 dACC) တွင် သာ. ကြီးမြတ် activation ပြ (BA 9, 46), နှင့်ထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုတစ်စုအတွက် activation မှဆွေမျိုး supramarginal gyrus (BA 40) ညာဘက် nonsexual လှုံ့ဆော်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုထိတွေ့နေစဉ်အတွင်း။ ထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုတွင်အဘယ်သူမျှမကဦးနှောက်ဒေသများအတွက် PHB အုပ်စုထက် သာ. ကြီးမြတ် activation ပြသ။ MNI ဇယားထဲမှာကိုသြဒိနိတ်အဖြစ် activated voxels များအတွက်သြဒီနိတ်အားလုံးပြသနေကြသည် 3, 4။ ဂဏန်း2အဆိုပါရာခိုငျနှုနျးက signal ကိုရွေးချယ်ထား ROIs များအတွက်တစ်ဦးချင်းစီစမ်းသပ်အခြေအနေထိန်းချုပ်မှုနှင့် PHB အုပ်စုများအတွက်အပြောင်းအလဲများကို (အကြောင်း, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် nonsexual အခြေအနေများဖြစ်ပါသည်) နှင့်ပုံပြသ3အဆိုပါအကြားအုပ်စုတစ်စုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ၏ရလဒ်များကိုအပေါ်အခြေခံပြီး; တစ်ခုချင်းစီကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွ၏တင်ဆက်မှုစဉ်အတွင်း ROIs အတွက်တစ်ဦးချင်းစီအချိန်အမှတ်မှာရာခိုင်နှုန်းက signal ကိုပြောင်းလဲမှုအသီးအသီးအုပ်စုထိုအတောအတွင်းစီးရီး (12 နှင့်5့အဲဒီနောက်7s ကိုစုစုပေါင်း) ဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
စားပွဲတင်3။ အုပ်စုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနေဖြင့်ဖော်ထုတ်ဦးနှောက်ဒေသများ.
စားပွဲတင်4။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုထိတွေ့စဉ်အတွင်း PHB အုပ်စုတစ်စုအတွက်ဆက်စပ်မှုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအတွက်ဖော်ထုတ်ဦးနှောက်ဒေသများ.
ပုံ2။ အဆိုပါအကြား-အုပ်စုကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ၏ရလဒ်များ. (က) နှစ်နိုင်ငံ thalamus (MNI ကိုသြဒိနိတ်; x = 6, y = -36, z = 4) (ခ) ညာဘက် dorsolateral prefrontal cortex (MNI ကိုသြဒိနိတ်;x = 56, y = 10, z = 22) (C) Left caudate နျူကလိယ (MNI ကိုသြဒိနိတ်; x = -38, y = -32, z = 2)(ဃ) ညာဘက် supramarginal gyrus (MNI ကိုသြဒိနိတ်; x = 50, y = -42, z = 32) (E) နဲ့ ညာဘက် anterior cingulate gyrus dorsal (MNI ကိုသြဒိနိတ်; x = 24, y = -16, z = 34) ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုအတွက် activation များ၏နှိုင်းယှဉ်၏ရလဒ်များအနုတ်အဆိုပါ PHB နှင့်ထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုများအကြား nonsexual လှုံ့ဆော်မှု (p <0.05, မှားယွင်းသောရှာဖွေတွေ့ရှိမှုနှုန်း, တညျ့) ။ PHB အုပ်စုနှင့်အပြာရောင်နှင့်အနီရောင်တို့ကိုအသီးသီးကိုယ်စားပြုသည်။ y-axis သည် signal signal အပြောင်းအလဲကိုပြသပြီး error bars သည် Standard Error of the Mean ကိုကိုယ်စားပြုတယ်။
ပုံ3။ အကျိုးစီးပွားချင်းစီဒေသအတွက် hemodynamic တုံ့ပြန်မှုအချိန်သင်တန်း.(က) နှစ်နိုင်ငံ thalamus (MNI ကိုသြဒိနိတ်; x = 6, y = -36, z = 4) (ခ) ညာဘက် dorsolateral prefrontal cortex (MNI ကိုသြဒိနိတ်; x = 56, y = 10, z = 22) (C) Left caudate နျူကလိယ (MNI ကိုသြဒိနိတ်; x = -38, y = -32, z = 2) (ဃ) ညာဘက် supramarginal gyrus (MNI ကိုသြဒိနိတ်; x = 50, y = -42, z = 32) (E) နဲ့ ညာဘက် anterior cingulate gyrus dorsal (MNI ကိုသြဒိနိတ်; x = 24, y = -16, z = 34) ။ အဆိုပါက y-axis နှင့် X-ဝင်ရိုးအသီးသီးရာခိုင်နှုန်းက signal ကိုပြောင်းလဲမှုနှင့်အချိန် (s), ဖော်ပြရန်နှင့်, အမှားအရက်ဆိုင်အဓိပ္ပာယ်များ၏နျ Standard မှားယွင်းနေသည်ကိုကိုယ်စားပြုသည်။
အဆိုပါ SAST-R ကိုရမှတ်နှင့်ဆက်စပ်သောသောဒေသများ၏ဆက်စပ်မှုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာညာဘက် thalamus နှင့် DLPFC (BA 9) (ပု SAST-R ကိုရမှတ်ဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့သရုပ်ပြp လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများနှင့်ထိတွေ့စဉ် PHB အုပ်စုတွင် <0.001၊ မပြင်ဆင်ရသေးသော၊ စားပွဲတင်မှာပြထားတဲ့အတိုင်း 4။ T ကပုံထဲမှာပြထားတဲ့အတိုင်းရာခိုင်နှုန်းက signal ကိုလက်ျာ thalamus ကနေဖြည်ချကြောင်းပြောင်းလဲမှုနှင့် DLPFC, hypersexuality ၏ပြင်းထန်မှုနှင့်အတူသိသိသာသာဆက်နွယ်နေကြောင်းကြောင်းပြသသူနောက်ဆက်တွဲခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းရလဒ်များ 4. လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုထိတွေ့စဉ်အတွင်း PHB အုပ်စုတစ်စုအတွက် SAST-R ကိုရမှတ်များနှင့်အတူအပြုသဘောဆက်နွယ်နေကြောင်းအဆိုပါရာခိုင်နှုန်းက signal ကိုလက်ျာ thalamus ပြောင်းလဲမှုများနှင့်ညာဘက် DLPFC (ညာ thalamus: r = 0.74, n = 23, p <0.01; ညာဘက် DLPFC: r = 0.63, n = 23, p <0.01) ။ ထို့အပြင်မှန်ကန်သော DLPFC နှင့် thalamus တွင်အချက်ပြမှုအပြောင်းအလဲများသည် PHB အုပ်စုရှိ HBI ရမှတ်များနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိခဲ့သည်။ r = 0.65, n = 23, p <0.01; ညာဘက် DLPFC: r = 0.53, n = 23, p <0.01), ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်း 4.
ပုံ4။ အဆိုပါဆက်စပ်မှုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းရလဒ်များ။ လက်ဝဲ, အလုပ်လုပ်တဲ့သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ် (fMRI) ဆက်စပ်မှုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ အဆိုပါလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒနှင့်စမ်းသပ်ခြင်း-R ကို (SAST-R) ပြသည့်လိင်စွဲလမ်းနေစဉ်အတွင်းဦးနှောက်လှုပ်ရှားမှုအကြားသိသိသာသာဆက်စပ်ဖေါ်ပြခြင်းဒေသများရမှတ် (p <0.001, တညျ့) ။ မှန်ပါသည်၊ areaရိယာတစ်ခုစီမှရရှိသောရာခိုင်နှုန်းအချက်ပြမှုအပြောင်းအလဲများနှင့်လိင်ပြင်းထန်မှုရမှတ်များ (ဥပမာ - SAST-R နှင့် Hypersexual Behaviour Inventory (HBI) ရမှတ်များ) အကြား linear ဆက်နွယ်မှု။ x- ဝင်ရိုးသည်လိင်ပြင်းထန်မှုရမှတ်များပြသပြီး y ဝင်ရိုးသည်အချက်ပြမှုပြောင်းလဲမှုရာခိုင်နှုန်းကိုကိုယ်စားပြုသည်။ (က) နှစ်နိုင်ငံ thalamus (MNI ကိုသြဒိနိတ်; x = 4, y = -32, z = 6) (ခ) ညာဘက် dorsolateral prefrontal cortex (MNI ကိုသြဒိနိတ်; x = 56, y = 8, z = 22) ။
ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုဒီခြားနားချက်ကဤတစ်ဦးချင်းစီအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ၏အာရုံကြောအလွှာအတွက်အလုပ်လုပ်တဲ့ပြောင်းလဲရန် related ခဲ့သည်ရှိမရှိ PHB ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီနှင့်, ဒါသည်မှန်လျှင်, အကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ၏အဆင့်ဆင့်အတွက်ကွာခြားချက်ရှိခဲ့ပါသည်ရှိမရှိဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ ဟောကိန်းထုတ်သကဲ့သို့, PHB အုပ်စုတစ်စုထိန်းချုပ်မှုနှိုင်းယှဉ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒနှင့်အ PFC နှင့် subcortical ဒေသများရှိပြောင်းလဲ activation ၏သိသိသာသာကြီးထွားအဆင့်ဆင့်ပြသသည်။ ဤရလဒ်သည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများအတွက် cue-သွေးဆောင်အလိုဆန္ဒ mediates သောအာရုံကြော circuitry အတွက်အလုပ်လုပ်တဲ့အပြောင်းအလဲများကိုပစ္စည်းဥစ္စာစွဲသို့မဟုတ်အပြုအမူစွဲနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအတွက် cue တင်ဆက်မှုမှတုန့်ပြန်သောသူတို့အားအလားတူဖြစ်ကြောင်းအကြံပြု (Garavan et al ။ , 2000; Tapert et al ။ , 2003; Crockford et al ။ , 2005; Franklin et al ။ , 2007;ko et al ။ , 2009; McClernon et al ။ , 2009). Voon et al ။ (2014) ပုံမှန်မဟုတ်သောအလိုဆန္ဒနှင့်အ compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအတွက်မြင့်အလိုဆန္ဒနှင့်ဆက်စပ်ဒေသများအတွက်အလုပ်လုပ်တဲ့အပြောင်းအလဲများကဖော်ပြခဲ့သည်။ ကျနော်တို့စုစုပေါင်း 12 ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒနှင့်အတူဆက်စပ်ဒေသများရှိစဉ်အတွင်း activation ၏ကြိမ်စီးရီးစုံစမ်းစစ်ဆေးဤရလဒ်များကိုပုံတူကူးယူခြင်းနှင့်တိုးချဲ့။
တွေးဆသည်အတိုင်း, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်၏ရလဒ်များကို၏စမ်းသပ်မှုဟာ PHB အုပ်စုတစ်စုကဤအုပ်စုသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒအဘို့အနိမ့်ခုံခဲ့ကြောင်းအကြံပြုထားတဲ့, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုထိတွေ့နေစဉ်အတွင်းထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုတစ်စုထက်ပိုမကြာခဏလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒပြကြောင်းပြသ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒသွေးဆောင်ခဲ့သည်သောအခါ, PHB အုပ်စုတစ်စုထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုတစ်စုကိုပြု၏ထက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ၏အမြင့်မားသောပြင်းထန်မှုပြသခဲ့သည်။ ဤရလဒ် (PHB အုပ်စုတစ်စုနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအပေါ်ယခင်တွေ့ရှိချက်များနှင့်ကိုက်ညီခဲ့သည်Laier et al ။ , 2013; Laier နှင့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်, 2014; Voon et al ။ , 2014), အထူးသဖြင့်ညစ်ညမ်းများအတွက်အလိုဆန္ဒကျဘာစွဲနေတဲ့သော့ချက်အခန်းကဏ္ဍအံ့သောငှါဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုဖို့ဦးနှောက်တုံ့ပြန်မှုအပေါ်ရလဒ်ကြောင့်လှုပ်ရှားမှုညွှန်ပြကြောင်းယခင် neuroimaging တွေ့ရှိချက်နှင့်အတူကြင် dovetail သင်တန်းသားများအပေါငျးတို့သအခါ, ချို့တဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ်လှုံ့ဆျောမှု / မျှော်လင့်အဖြစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြိုက်သို့မဟုတ် arousal / ကုပါဝင်ပတ်သက်ဦးနှောက်ဒေသများတွင်လေ့လာတွေ့ရှိဖြစ်ပါတယ် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကြွဆေးနှင့်ထိတွေ့i (Georgiadis နှင့် Kringelbach, 2012). ဦးနှောက်ပုံရိပ်၏အုပ်စုနှိုင်းယှဉ်၏ရလဒ်များကိုညာဘက် DLPFC (BA 9) နှင့်လက်ျာ dACC (BA 24 နှင့် 32), လက်ဝဲ caudate နျူကလိယ, ညာ supramarginal gyrus (BA 40), နှင့်လက်ျာဘက်အပါအဝင် subcortical ဒေသများအတွက်ပြောင်းလဲ activation ထင်ရှား thalamus, ဤပွောငျးလဲအဆိုပါ PHB အုပ်စုတစ်စု၏အမူအကျင့်လက္ခဏာများနှင့်ဆက်စပ်မည်အကြောင်းတည်း။ ဦးနှောက်ကို Activation အပြင်, ကျနော်တို့ကဤဒေသများအတွင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ၏ arousal စဉ်နှင့်အပြီးဤဒေသများအတွင်း hemodynamic တုံ့ပြန်မှုနေတဲ့အချိန်စီးရီးဆန်းစစ်ခဲ့သည်။
ဤအဒေသများအနက်ဘယ်ဘက် caudate နျူကလိယနှင့်ညာဘက် ACC (BA 24 နှင့် 32) နှင့်လက်ျာ DLPFC လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ၏စိတ်ခွန်အားနိုးအစိတ်အပိုင်းတွေနဲ့ဆက်စပ်ခံရဖို့ယူဆနေကြသည်။ လှုံ့ဆျောမှုနှင့်ဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့အတွက် caudate နျူကလိယ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှု (လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုရန်၎င်း၏တုံ့ပြန်မှုကိုအကောင့်စေခြင်းငှါ,Delgado, 2007) ။ အဆိုပါ dorsal striatum ဆုလာဘ်မျှော်လင့် (စဉ်အတွင်း activated ဖြစ်ပါတယ်Delgado, 2007), အရာဖြစ်နိုင်သည်ထိုကဲ့သို့သောမျှော်လင့်နဲ့ဆက်စပ်ကြောင်းဆန္ဒထင်ဟပ်။ ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုနှင့်ဆက်စပ်သည့်အာရုံကြောတုံ့ပြန်မှု၏လေ့လာမှုတစ်ခုမှာတော့ညစ်ညမ်းထိတွေ့မှု၏ရလဒ်အဖြစ်မကြာခဏ activation ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုထဲမှာ, caudate နျူကလိယအပါအဝင်ချဝတ်ဆင်ခြင်းနှင့် striatum ၏ downregulation ဖြစ်ပေါ်စေခြင်းငှါ, (Kühnနှင့် Gallinat, 2014). သို့သော်လက်ရှိလေ့လာမှုမှာပိုမိုတက်ကြွစွာ PHB အုပ်စုတစ်စုကပိုမကြာခဏညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်သော်လည်း, ထို PHB အုပ်စုတစ်စုအတွက် caudate နျူကလိယအတွင်းကြည့်ရှုလေ့လာခဲ့သည်။ အဆိုပါပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှု၏ရလဒ်များကိုနှင့်သူတို့အကြားကဤခြားနားချက် Kühnနှင့် Gallinat (2014) သင်တန်းသားများကိုအတွက်ခြားနားချက်အားဖြင့်ရှင်းပြပါလိမ့်မယ်။ အကြောင်း, ယခင်လေ့လာမှုမှာကျန်းမာအထီးလူကြီးများ၏အသုံးပြုမှုကိုမှမတူဘဲ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့လာမှု PHB နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအပေါ်ကောက်ယူခဲ့ပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ သက်သေအထောက်အထားများစုဆောင်းပါ (caudate နျူကလိယလှုံ့ဆော်မှု-တုံ့ပြန်မှုအလေ့အထသင်ယူမှုနှင့်စွဲလမ်းအပြုအမူများ၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများအတွက်အရေးကြီးသောကြောင်းအကြံပြုVanderschuren နှင့် Everitt, 2005). ဒီလေ့လာမှုအတွက် caudate နျူကလိယ၏ activation လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ cue-reactivity ကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံထပ်ခါတလဲလဲထိတွေ့ပြီးနောက်ထူထောင်ကြောင်းအကြံပြုစေခြင်းငှါ,.
အဆိုပါ dACC (လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ၏စိတ်ခွန်အားနိုးယန္တရားများနှင့်ဆက်စပ်သောခံရဖို့လူသိများသည်Redouté et al ။ , 2000; Arnow et al ။ , 2002; Hamann et al ။ , 2004; Ferretti et al ။ , 2005; Ponseti et al ။ , 2006; ရှင်ပေါလု et al ။ , 2008). dACC activation ကျွန်တော်တို့ရဲ့တွေ့ရှိချက်ကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒအတွက်တစ်ဦးအခန်းကဏ္ဍရှိကြောင်းအကြံပြု, ဤရလာဒ်များကိုအတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေနဲ့အတူဘာသာရပ်များအတွက်အလိုဆန္ဒ-related အာရုံကြောလှုပ်ရှားမှုအပေါ်တစ်ဦးလေ့လာမှုသူတို့အားအလားတူခဲ့ကြသည် (Voon et al ။ , 2014) ။ ထို့အပြင် dACC (အပြုအမူစကားရပ်များအတွက်တတ်ပြီးနှင့်တတ်ပြီးများ၏ဖိနှိပ်မှုများအကြားပဋိပက္ခစောင့်ကြည့်ရေးတှငျပါဝငျခွငျးအားဖွငျ့ရည်မှန်းချက်-oriented အပြုအမူများ၏ကနဦးအပြောင်းအလဲနဲ့အတွက်အရေးကြီးသောဖြစ်လူသိများသည်Devinsky et al ။ , 1995; Arnow et al ။ , 2002;Karama et al ။ , 2002; Moulier et al ။ , 2006; Safron et al ။ , 2007). အဆိုပါ DLPFC နှင့် parietal ပေါ်၌ရှိသောအမြှေးမှ Neuroanatomically, အ dACC စီမံကိန်းများကို (Devinsky et al ။ , 1995; Pizzagalli et al ။ , 2001). ဒီလေ့လာမှုမှာ PHB အုပ်စုတစ်စုအတွက် dACC အတွက် activation လုပ်ရပ်များနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများ၏တင်ပြချက်ကာလအတွင်းအခွအေနေအချက်များကြောင့် Impulses သတင်းပို့ဖိနှိပ်ဖို့တိုက်တွန်းအဖြစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Impulses သတင်းပို့ဖော်ပြနိုင်ရန်တိုက်တွန်းအကြားပြည်တွင်းရေးပဋိပက္ခရောင်ပြန်ဟပ်ပါလိမ့်မယ်။
အဆိုပါ supramarginal gyrus ၏ activation လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုအဖြစ်ကိုရိပ်မိကြသည်ပစ်မှတ်မှပိုမိုအာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်ဆက်စပ်နေသည် (Redouté et al ။ , 2000; Stoléru et al ။ , 2012) ။ ယခင်လေ့လာမှုများ (လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုဖို့တိုးမြှင့်အာရုံကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒထိန်းသိမ်းခြင်းအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍကြောင်းအဆိုပြုထားကြပါပြီBarlow, 1986; Janssen နှင့် Everaerd, 1993) နှင့်ရှာကြံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအာရုံခံစားမှုနှင့်ဆက်စပ်သောဖြစ်ပါတယ် (Kagerer et al ။ , 2014). လက်ရှိလေ့လာမှုမှာ supramarginal activation လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုမှ PHB ဘာသာရပ်များအားဖြင့်ပေးဆောင်ခဲ့ သာ. အာရုံကိုထင်ဟပ်နိုင်ခြင်းနှင့်ထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုတစ်စုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ၏မြင့်မားသောအဆင့်ဆင့်ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။
သိသိသာသာတိုက်ရိုက် PHB ဘာသာရပ်များအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲ၏ပြင်းထန်မှုနှင့်အတူဆက်နွယ်နေကြောင်းအုပ်စုရလဒ်များကိုအကြား, အ DLPFC နှင့် thalamus အတွက် activated သောဒေသများအနက်။ ကျနော်တို့ (လိင်စိတ်နိုးထအပေါ်လေ့လာမှုများ၏ယခင်တွေ့ရှိချက်များနှင့်အညီဖြစ်သည့် သာ. ကြီးမြတ် thalamus activation, လေ့လာတွေ့ရှိRedouté et al ။ , 2000; Moulier et al ။ , 2006) ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒအပေါ်ယခင်လေ့လာမှုများအရ, thalamus ၏ activation လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒအားဖြင့်သွေးဆောင်နေကြသည်နှင့်အပြုသဘော (penile စိုက်ထူဆက်နွယ်နေကြောင်းသောဇီဝကမ္မတုံ့ပြန်မှု (လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုအတွက်ဆိုလိုသည်မှာစေတနာ) နှင့်ဆက်စပ်သောဖြစ်ပါတယ်MacLean နှင့် Ploog, 1962; Redouté et al ။ , 2000; Moulier et al ။ , 2006). စိတ်ဝင်စားစရာ, ငါတို့သည်လည်းထိန်းချုပ်မှုအတွက်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါပု thalamus အတွက်ပိုမိုမြင့်မားခြင်းနှင့်ပိုမိုကျယ်ပြန် hemodynamic ပုံစံတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဤသည်ပိုမိုမြင့်မားခြင်းနှင့်ပိုမိုကျယ်ပြန် hemodynamic တုံ့ပြန်မှုလိင်စိတ်နိုးထအားကောင်းနှင့် PHB နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအတွက်တာရှညျခဲ့ကြောင်းညွှန်ပြပါလိမ့်မယ်။
cue-သွေးဆောင်အလိုဆန္ဒစဉ်အတွင်းစွဲနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအတွက်အာရုံကြောလှုပ်ရှားမှုအပေါ်လေ့လာမှုများ၏တွေ့ရှိချက်များကိုဆင်တူကျနော်တို့ PHB အုပ်စုတွင်ပြောင်းလဲ PFC function ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ PFC (အနာဂတ်အစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်းအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍနှင့်မှတ်ဉာဏ်အလုပ်လုပ်ကိုင်Bonson et al ။ , 2002) ။ Neuroanatomically, အ PFC (ထို dACC, caudate နျူကလိယနှင့် parietal ပေါ်၌ရှိသောအမြှေးအပါအဝင်အမျိုးမျိုးသောဒေသများမှအပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်နေသည်Devinsky et al ။ , 1995; Pizzagalli et al ။ , 2001; Goldman-Rakic ​​နှင့်ဟောင်ကောင်, 2002). စွဲလမ်းမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ယခင်လေ့လာမှုများအရ PFC အပါအဝင်ဤကွန်ယက်၏ကမောက်ကမဖြစ်မှုသည်ကိုယ်လက်အင်္ဂါများဆုလာဘ်ဒေသများရှိ PFC ၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှင့်ဆက်စပ်နေကြောင်းပြသခဲ့သည်၊ ၎င်းမှာချုပ်တည်းခြင်း၊ (Goldman-Rakic ​​နှင့်ဟောင်ကောင်, 2002; Feil et al ။ , 2010; စတိန်းနှင့် Volkow, 2011; Kühnနှင့် Gallinat, 2014). အထူးသဖြင့်ဤလေ့လာမှုများထိုကဲ့သို့သောပစ္စည်းဥစ္စာများနှင့်စွဲအပြုအမူတွေထဲမှာရှိသကဲ့သို့တစ်ဦးစွဲလမ်း cue ဖို့သညျ့တိုးလာ sensitivity ကိုအဖြစ်, ရောဂါလက္ခဏာအတွက်ရလဒ်များအရာ salience ထည့်သွင်းတွက်ချက်မှုတစ်ခုချွတ်ယွင်း, အဖြစ် DLPFC များ၏နှောင့်အယှက် function ကိုဖော်ထုတ်ခဲ့ကြပြီးပုံမှန်-ဆုချီးလှုံ့ဆော်မှုစိတ်ဝင်စားလျော့နည်းသွား (Goldman-Rakic ​​နှင့်ဟောင်ကောင်, 2002; စတိန်းနှင့် Volkow, 2011) ။ လက်ရှိလေ့လာမှုများတွင်ထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အဆိုပါ PHB အုပ်စု သာ. ကြီးမြတ် DLPFC activation များ၏လေ့လာရေးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုမှအလွန်အကျွံ salience ထည့်သွင်းတွက်ချက်မှုရောင်ပြန်ဟပ်ပါလိမ့်မယ်။
အကျဉ်းချုပ်ထဲမှာ, PHB အုပ်စုကိုပြောင်းလဲဦးနှောက်လှုပ်ရှားမှုနဲ့ဆက်စပ်ခဲ့ သာ. ကြီးမြတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒပြသခဲ့သည်။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက် PHB အုပ်စုသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုမှအလွန်အကျွံအာရုံစိုက်ခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုဖို့ခြွင်းချက်တုံ့ပြန်မှုစနစ်တကျကမကထပြုခဲ့ခြင်းကိုခံရနိုင်ဘူးလို့အလိုအလျောက်တုန့်ပြန်စေခြင်းငှါအံ့သောငှါဖော်ပြသည်။ အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်းပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုများ၏ကန့်သတ်ခဲ့ကြသည်။ ပထမဦးစွာဘာသာရပ်များ၏ပြိုင်ပွဲအာရှဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒုတိယအချက်မှာဤလေ့လာမှုကိုသာလိင်ကွဲအထီးဘာသာရပ်များပါဝင်ပတ်သက်နှင့်အမျိုးသမီးများနှင့်လိင်တူဆက်ဆံသူယောက်ျားအဘာသာရပ်များနှငျ့ပတျသကျသောအနာဂတ်လေ့လာမှုများပိုမိုနားလည် PHB အတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေရပါမည်။ Co-ဖြစ်ပေါ်စိတ်ရောဂါနှင့်အတူ PHB ဘာသာရပ်များ, အရှင်တစ်ခုတည်းကိုသာ PHB အပေါ်အခြေခံပြီးအာရုံကြောကမောက်ကမဖြစ်မှု၏စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုမရှိစေရန်, ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုမှာစာရင်းသွင်းမခံခဲ့ရပါ။ သို့သော်တစ်ဦးလေ့လာမှုအရသိရသည် Weiss (2004), PHB နှင့်အတူယောက်ျား၏ 28% အဓိကစိတ်ကျရောဂါရောဂါခံစားနေကြရသည်။ အတူတူကဤအချက်များယူပြီးကျယ်ပြန့်တစ်လောကလုံးလူဦးရေလေ့လာမှုရလဒ်များ၏ယေဘုယျကန့်သတ်။ နောက်ဆုံးအုပ်စုနှစ်စု Self-အသိအမြင်နှင့် / သို့မဟုတ် PHB သင်တန်းသားများ၏ကုသမှုကြောင့်စိတ်ခံစားမှု sensitivity ကိုရိုသေလေးစားမှုနှင့်အတူကွဲပြားကြပေမည်။ ကျနော်တို့နှိုင်းယှဉ်ရည်ရွယ်ချက်များနှင့်ထိုကဲ့သို့သောစိတ်ရောဂါမမှန်၏ရှေ့မှောက်တွင်နှင့်လက်ရှိအသုံးပြုတင်းကျပ်ဖယ်စံ, လျှောက်ထားခြင်းအားဖြင့်, အသက်, ပညာရေးအဆငျ့နှင့်သန်အပါအဝင်အရေးကြီးသောလူဦးရေအချိုးအစား variable တွေကိုများအတွက်ကိုက်ညီခြင်းဖြင့်ထိန်းချုပ်မှုများနှင့် PHB အုပ်စုများအကြားခြားနားချက်များကိုလျော့ချဖို့ကြိုးစားခဲ့ နှစ်ဦးစလုံးအုပ်စုများမှစိတ်ကိုဆေး။ Next ကိုကျနော်တို့ကုသမှုကာလသို့မဟုတ်ကုသမှုအမျိုးအစားနှင့်ဆက်စပ်သောဖြစ်ကြောင်း variable တွေကို PHB နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုမှတုံ့ပြန်မှုအပါအဝင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှု, အကျိုးသက်ရောက်စေပုံကိုဆန်းစစ်နိုင်ရန်စီစဉ်ထားသည်။
ဤအကန့်သတ်နေသော်လည်းဤလေ့လာမှု၏ရလဒ်များစာပေမှသိသိသာသာအထောက်အကူနှင့်အနာဂတ်သုတေသနအတွက်သိသာထင်ရှားသောသက်ရောက်မှုရှိသည်။ ကျနော်တို့ကိုတိုက်ရိုက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒနှင့်အ PHB နှင့်အတူဘာသာရပ်များအကြားတွင်သည်ဤဒေသများ၏လှုပ်ရှားမှုများအတွက်ယာယီအပြောင်းအလဲများနှင့်အတူဆက်နွယ်ခဲ့သတ်သတ်မှတ်မှတ်ဦးနှောက်ဒေသများတွင်တွေ့ရှိခဲ့ပါသည်။ ပစ္စည်းဥစ္စာများနှင့်အမူအကျင့်စွဲအပေါ်ဦးနှောက်ပုံရိပ်လေ့လာမှုများကဲ့သို့ပင် PHB ပင်မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏ neurotoxicity မရှိပဲ, PFC အတွက်အလုပ်လုပ်တဲ့အပြောင်းအလဲများနှင့် subcortical ဒေသများနှင့်ဆက်စပ်သောခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်များကို PHB အတူအပြုအမူတွေနဲ့တစ်ဦးချင်းစီ၏ဆက်စပ်အာရုံကြောယန္တရားများ characterizing များအတွက်ထို့ကြောင့်အသုံးဝင်သောဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ယခင်လေ့လာမှုများ၌ရှိသကဲ့သို့လက္ခဏာများများ၏ဖော်ပြချက်ကျော်လွန်တဲ့ခြေလှမ်းသွားပါ။
ဤလုပ်ငန်းကိုကိုရီးယားအခြေခံသိပ္ပံအင်စတီကျု (အမှတ် E35600) နှင့် 2014 Chungnam အမျိုးသားတက္ကသိုလ်မှသုတေသနရန်ပုံငွေကထောက်ပံ့ပေးခဲ့သည်။
အဆိုပါစာရေးဆရာကဒီလေ့လာမှု 3T MRI စကင်နာ (Phillips က) ကို အသုံးပြု. လူ့ Imaging ကရေးစင်တာများ၏ဦးစီးဌာနမှာကောက်ယူခံရဖို့ခွင့်ပြုဘို့ကိုရီးယားအခြေခံသိပ္ပံအင်စတီကျုကျေးဇူးတင်ချင်ပါတယ်။
အမေရိကန်စိတ်ရောဂါအသင်း (2013) ။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါများ၏ diagnostic နှင့်စာရင်းအင်းလက်စွဲ, 5th Edn။ Arlington, VA သို့: အမေရိကန်စိတ်ရောဂါထုတ်ဝေရေး။
Arnow, BA, Desmond, je, Banner, ll, ဂလိုဗာ, GH, ရှောလမုန်, အေ, Polan, ML, et al ။ (2002) ။ ကျန်းမာ, လိင်ကွဲအထီးအတွက်ဦးနှောက်ကို Activation နှင့်လိင်စိတ်နိုးထ။ ဦးနှောက်ကို 125, 1014-1023 ။ Doi: 10.1093 / ဦးနှောက် / awf108
Barlow, DH (1986) ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု၏အကြောင်းတရားများ: စိုးရိမ်စိတ်နှင့်သိမြင်မှုနှောင့်အယှက်၏အခန်းကဏ္ဍကို။ ဂျေနှင့်တိုင်ပင်ပါ။ Clin ။ Psychol။ 54, 140-148 ။ Doi: 10.1037 / 0022-006X.54.2.140
Beck, AT, စတီယာရင်, RA, နှင့်ဘရောင်း, GK (1996) ။ Beck စီးပွားပျက်ကပ် Inventory-II ကို။ San Antonio တွင်, TX: စိတ်ဓာတ်ကော်ပိုရေးရှင်း။
Birn, RM, ကော့, RW နှင့် Bandettini, PA (2002) ။ အဖြစ်အပျက်-ဆက်စပ် fMRI အတွက်ခန့်မှန်းချက်နှိုင်းယှဉ် detection: အကောင်းဆုံးလှုံ့ဆော်မှုအချိန်ကိုက်ရွေးချယ်ရာတွင်။ Neuroimage 15, 252-264 ။ Doi: 10.1006 / nimg.2001.0964
အနက်ရောင်, DW (2000) ။ အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏ရောဂါနှင့် phenomenology ။ CNS Spectr ။ 5, 26-72 ။ Doi: 10.1017 / S1092852900012645
Bonson, KR, Grant က, SJ, Contoreggi, CS, Links များ, JM, Metcalfe, ဂျေ, Weyl, HL, et al ။ (2002) ။ အာရုံကြောစနစ်များနှင့် cue-သွေးဆောင်ကင်းတဏှာ။ Neuropsychopharmacology 26, 376–386. doi: 10.1016/S0893-133X(01)00371-2
Bühler, အမ်, Vollstädt-Klein, အက်စ်, Klemen, ဂျေနှင့် Smolka, MN (2008) ။ ခေါ်ဆောင်သွားလှုံ့ဆော်မှုတင်ဆက်မှုပုံစံဒီဇိုင်းကဦးနှောက်ကို Activation ပုံစံများကိုထိခိုက်သလား အဖြစ်အပျက်-related vs. fMRI ဒီဇိုင်းများပိတ်ဆို့။ ပြုမူနေ။ ဦးနှောက် Funct ။ 4:30. doi: 10.1186/1744-9081-4-30
Buss, AH နှင့်ပယ်ရီ, အမ် (1992) ။ အဆိုပါကျူးကျော်မေးခွန်းလွှာ။ ဂျေ Pers ။ Soc ။ Psychol ။ 63, 452-459 ။ Doi: 10.1037 / 0022-3514.63.3.452
Carnes, P. (2013) ။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်ဆန့်ကျင်: အလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲကူညီပေးခြင်း။ Center ကိုစီးတီး, MN: Hazelden ထုတ်ဝေရေး။
Carnes, P. , အစိမ်းရောင်, ခနှင့် Carnes, အက်စ် (2010) ။ ကွဲပြားခြားနားသောသေးတူညီ: တိမ်းညွတ်ခြင်းနှင့်ကျား, မရောင်ပြန်ဟပ်ဖို့လိင်စွဲလမ်းစစ်ဆေးခြင်းစမ်းသပ် (SAST) ပို. ။ လိင်။ စှဲလမျးသူ။ Compuls ။ 17, 7-30 ။ Doi: 10.1080 / 10720161003604087
Carnes, PJ (2001) ။ အရိပ်ထဲကထုတ်: နားလည်မှုလိင်စွဲလမ်း။ Center ကိုစီးတီး, MN: Hazelden ထုတ်ဝေရေး။
Coleman, အီး (1992) ။ အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူကနေသင့်ရဲ့စိတ်ရှည်ဆငျးရဲဒုက်ခလား? Psychiatric ။ အမ်း။ 22, 320–325. doi: 10.3928/0048-5713-19920601-09
Crockford, DN, Goodyear, ခ, Edwards က, ဂျေ, Quickfall, ဂျေနှင့် El-Guebaly, N. (2005) ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားသမားတွေအတွက် Cue-သွေးဆောင်ဦးနှောက်လှုပ်ရှားမှု။ Biol ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု 58, 787-795 ။ Doi: 10.1016 / j.biopsych.2005.04.037
Delgado, MR (2007) ။ လူ့ striatum အတွက်ဆုလာဘ်-related တုံ့ပြန်မှု။ အမ်း။ နယူးယော့ Acad ။ သိပ္ပံ။ 1104, 70-88 ။ Doi: 10.1196 / annals.1390.002
Devinsky, O. , Morrell, MJ နှင့် Vogt, BA (1995) ။ အပြုအမူမှ anterior cingulate cortex ပံ့ပိုးမှုများကိုသာ။ ဦးနှောက်ကို 118, 279-306 ။ Doi: 10.1093 / ဦးနှောက် / 118.1.279
Feil, ဂျေ, Sheppard, ဃ, Fitzgerald, PB, Yücel, အမ်, Lubman, ကပစနှင့် Bradshaw, JL (2010) ။ စွဲ, compulsive မူးယစ်ဆေးရှာနှင့် inhibitory ထိန်းချုပ်မှုထိန်းညှိအတွက် frontostriatal ယန္တရားများ၏အခန်းကဏ္ဍကို။ neuroscience ။ Biobehav ။ ဗျာ 35, 248-275 ။ Doi: 10.1016 / j.neubiorev.2010.03.001
et al Ferretti, အေ, Caulo, အမ်, Del Gratta, C တို့, Di Matteo, R. , Merla, အေ, Montorsi, အက်ဖ်။ (2005) ။ အထီးလိင်စိတ်နိုးထ၏ Dynamics ကို: fMRI အားဖြင့်ထုတ်ဖော်ပြသဦးနှောက်ကို Activation ၏ကွဲပြားအစိတ်အပိုင်းများကို။ Neuroimage 26, 1086-1096 ။ Doi: 10.1016 / j.neuroimage.2005.03.025
Franklin, TR, ဝမ်, Z. , ဝမ်, ဂျေ, Sciortino, N. , Harper ကို, ဃ, Li က, Y. , et al ။ (2007) ။ နီကိုတင်းဆုတ်ခွာ၏လွတ်လပ်သောစီးကရက်ဆေးလိပ်တွေကိုမှ Limbic activation: တစ် perfusion fMRI လေ့လာမှု။ Neuropsychopharmacology 32, 2301-2309 ။ Doi: 10.1038 / sj.npp.1301371
Garavan, အိပ်ချ်, Pankiewicz, ဂျေ, Bloom, အေ, ချိုက JK, Sperry, အယ်လ်, Ross ကတီဂျေ, et al ။ (2000) ။ Cue-သွေးဆောင်ကင်းတဏှာ: မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲသူများနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးလှုံ့ဆော်မှုများအတွက် neuroanatomical သတ်မှတ်ချက်။ နံနက်။ ဂျေစိတ်ရောဂါကုသမှု 157, 1789-1798 ။ Doi: 10.1176 / appi.ajp.157.11.1789
Georgiadis, JR နှင့် Kringelbach, ML (2012) ။ လူ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုသံသရာ: ကအခြားအပျော်အပါးမှလိင်ချိတ်ဆက်ဦးနှောက်ပုံရိပ်သက်သေအထောက်အထား။ prog ။ Neurobiol ။ 98, 49-81 ။ Doi: 10.1016 / j.pneurobio.2012.05.004
Goldman-Rakic, PS နှင့်ဟောင်ကောင်, HC (2002) ။ "မျောက်နှင့်လူသားအတွက် dorsolateral prefrontal cortex ၏ Functional ဗိသုကာ," အတွက် တိုကျရိုကျပေါ်၌ရှိသောအမြှေးရာထူးအမည်၏အခြေခံမူများ, eds ၎င်းကို Stuss နှင့် RT ကိုနိုက် (နယူးယောက်, NY: အောက်စ်ဖို့တက္ကသိုလ်ကစာနယ်ဇင်း), 85-95 ။
စတိန်း, RZ နှင့် Volkow, ND (2011) ။ စွဲလမ်းအတွက် prefrontal cortex ၏ကမောက်ကမဖြစ်မှု: တွေ့ရှိချက်များနှင့်လက်တွေ့သက်ရောက်မှု neuroimaging ။ နတ်။ ဗျာ neuroscience ။ 12, 652-669 ။ Doi: 10.1038 / nrn3119
Goodman, အေ (1993) ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲ၏ရောဂါနှင့်ကုသမှု။ ဂျေလိင်အိမ်ထောင်ရေး Ther ။ 19, 225-251 ။ Doi: 10.1080 / 00926239308404908
Goodman, အေ (2001) ။ တစ်နာမ၌ကဘာလဲ? မောင်းနှင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတစ်ခု syndrome ရောဂါသတ်မှတ်ဘို့အဝေါဟာရရှင်းလင်းချက်။ လိင်စွဲလမ်း။ Compuls ။ 8, 191-213 ။ Doi: 10.1080 / 107201601753459919
Hamann, အက်စ်, Herman, RA, Nolan, CL နှင့်ဝေါ်လဲန်, K. (2004) ။ အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးအမြင်အာရုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုမှ amygdala တုံ့ပြန်ကွာခြား။ နတ်။ neuroscience။ 7, 411-416 ။ Doi: 10.1038 / nn1208
Janssen, အီးများနှင့် Everaerd, ဒဗလျူ (1993) ။ အထီးလိင်စိတ်နိုးထ၏စိတ်ပိုင်းဖြတ်။ အမ်း။ ဗျာလိင် Res ။ 4, 211-245 ။ Doi: 10.1080 / 10532528.1993.10559888
Kafka, အမတ် (2010) ။ Hypersexual ရောဂါ: DSM-V ကိုများအတွက်အဆိုပြုရောဂါ။ Arch ။ လိင်။ ပြုမူနေ။ 39, 377–400. doi: 10.1007/s10508-009-9574-7
Kagerer, အက်စ်, Wehrum, အက်စ်, Klucken, တီ, ဝေါလ်တာ, ခ, Vaitl, ဃ, နှင့် Stark, R. (2014) ။ လိင်ဆွဲဆောင်: လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုဖို့အာရုံကိုဘက်လိုက်မှုအတွက်တစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှုစုံစမ်းစစ်ဆေး။ PLoS ONE 9: e107795 ။ Doi: 10.1371 / journal.pone.0107795
Karama, အက်စ်, Lecours, AR, Leroux, JM, Bourgouin, P. , Beaudoin, G. အ, Joubert, အက်စ်, et al ။ (2002) ။ ခေါ်ဆောင်သွားရုပ်ရှင်ကောက်နှုတ်ချက်၏ကြည့်ရှုနေစဉ်အတွင်းယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းအတွက်ဦးနှောက်ကို Activation ဒေသများတွင်။ Hum ။ ဦးနှောက် Mapp, 16, 1-13 ။ Doi: 10.1002 / hbm.10014
Kim က, အမ်နှင့် Kwak, JB- (2011) ။ ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာခေတ်ထဲမှာလူငယ်ကျဘာစွဲ။ ဂျေ Humanit ။ 29, 283-326 ။
et al ko, CH, လျူ, GC, Hsiao, အက်စ်, ယန်း, JY ယန်, MJ, လင်း WC ။ (2009) ။ အွန်လိုင်းဂိမ်းစွဲလမ်း၏ဂိမ်းကစားတတ်ပြီးသူနဲ့ဆက်စပ်ဦးနှောက်လုပ်ငန်းဆောင်တာ။ ဂျေ Psychiatric ။ res ။ 43, 739-747 ။ Doi: 10.1016 / j.jpsychires.2008.09.012
Kor, အေ, Fogel, Y. , ရိဒ်, RC နှင့် Potenza, MN (2013) ။ hypersexual ရောဂါတခုစွဲအဖြစ်ခွဲခြားခံရသငျ့သလော လိင်။ စှဲလမျးသူ။ Compuls ။ 20, 27-47 ။ Doi: 10.1080 / 10720162.2013.768132
Kühn, အက်စ်နှင့် Gallinat, ဂျေ (2014) ။ ဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုနှင့်ဆက်စပ် functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှု: porn အပေါ်ဦးနှောက်။ ဂျေအေအမ်အေစိတ်ရောဂါကုသမှု 71, 827-834 ။ Doi: 10.1001 / jamapsychiatry.2014.93
Kuzma, JM နှင့်အမဲရောင်, DW (2008) ။ ကူးစက်ရောဂါ, ပျံ့နှံ့နှင့်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူကသဘာဝသမိုင်း။Psychiatric ။ Clin ။ မြောက်အမေရိက Am ။ 31, 603-611 ။ Doi: 10.1016 / j.psc.2008.06.005
Laier, C တို့နှင့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်, အမ် (2014) ။ တစ်သိမြင်-အပြုအမူအမြင်ကနေကျဘာစွဲမှပံ့ပိုးအချက်များပေါ်တွင်ပင်ကိုယ်မူလသက်သေအထောက်အထားများနှင့်သီအိုရီထည့်သွင်းစဉ်းစား။ လိင်။ စှဲလမျးသူ။ Compuls ။ 21, 305-321 ။ Doi: 10.1080 / 10720162.2014.970722
Laier, C တို့, Pawlikowski, အမ်, Pekal, ဂျေ, Schulte, လက်ဗွေနှင့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်, အမ် (2013) ။ ဘာစွဲ: အတွေ့အကြုံရှိလိင်စိတ်နိုးထညစ်ညမ်းနှင့်မစစ်မှန်သောဘဝလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆက်အသွယ်စောင့်ကြည့်သည့်အခါခြားနားချက်ကိုမှန်ကန်စေသည်။ ဂျေပြုမူနေ။ စှဲလမျးသူ။ 2, 100-107 ။ Doi: 10.1556 / JBA.2.2013.002
lang, PJ, Bradley, MM နှင့် Cuthbert, BN (2008) ။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာထိခိုက်စေရုပ်ပုံစနစ် (IAPS): အကျိုးသက်ရောက်စေရုပ်ပုံများ၏ Ratings အဖွဲ့နှင့်ညွှန်ကြားချက်လက်စွဲ။ နည်းပညာဆိုင်ရာအစီရင်ခံစာ A-8 ။ Gainesville, FL: ဖလော်ရီဒါတက္ကသိုလ်။
MacLean, PD နှင့် Ploog, DW (1962) ။ penile စိုက်ထူ၏နှောက်ကိုယ်စားပြုမှု။ ဂျေ Neurophysiol ။ 25, 29-55 ။
McClernon, FJ, Kozink, RV, Lutz, Am နှင့်နှင်းဆီ, je (2009) ။ 24-ဇဆေးလိပ်သောက် abstinence နှောက် cortex နဲ့ dorsal striatum အတွက်ဆေးလိပ်သောက်တွေကိုမှ fMRI-BOLD activation potentiates ။ Psychopharmacology 204, 25–35. doi: 10.1007/s00213-008-1436-9
Moulier, V. , Mouras, အိပ်ချ်, et al Pélégrini-Issac, အမ်, Glutron, ဃ, Rouxel, R. , Grandjean, ခ။ (2006) ။ လူ့ယောက်ျားအတွက်ဓာတ်ပုံပြပွဲလှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့် evoked penile စိုက်ထူ၏ Neuroanatomical Correlate ။ Neuroimage 33, 689-699 ။ Doi: 10.1016 / j.neuroimage.2006.06.037
Patton, JH, စတန်းဖို့ဒ်, က MS နှင့် Barratt, ES (1995) ။ အဆိုပါ Barratt Impulse စကေး၏ factor ဖွဲ့စည်းပုံမှာ။ ဂျေ Clin ။ Psychol ။ 51, 768-774 ။
et al ပေါလု, တီ, Schiffer, ခ, Zwarg, တီ, Krüger, TH, Karama, အက်စ်, Schedlowski, အမ်။ (2008) ။ လိင်ကွဲများနှင့်လိင်တူဆက်ဆံသူအမျိုးသားများအတွက်အမြင်အာရုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုဖို့ဦးနှောက်တုံ့ပြန်မှု။ Hum ။ ဦးနှောက် Mapp ။ 29, 726-735 ။ Doi: 10.1002 / hbm.20435
Pizzagalli, ဃ, et al Pascual-Marquis, RD, Nitschke, JB, Oakes, TR, Larson, CL, Abercrombie, HC ။ (2001) ။ ဦးနှောက်လျှပ်စစ် tomography ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာထံမှသက်သေအထောက်အထား: အဓိကစိတ်ကျရောဂါအတွက်ကုသမှုတုံ့ပြန်မှုဒီဂရီတစ်ဦးခန့်မှန်းအဖြစ် anterior cingulate လှုပ်ရှားမှု။ နံနက်။ ဂျေစိတ်ရောဂါကုသမှု 158, 405-415 ။ Doi: 10.1176 / appi.ajp.158.3.405
et al Ponseti, ဂျေ, Bosinski, HA, Wolff, အက်စ်, Peller, အမ်, Jansen, O. , Mehdorn, HM ။ (2006) ။ လူသားများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိမ်းညွတ်များအတွက်အလုပ်လုပ်တဲ့ endophenotype ။ Neuroimage 33, 825-833 ။ Doi: 10.1016 / j.neuroimage.2006.08.002
Redouté, ဂျေ, Stoléru, အက်စ်, Grégoire, MC, ကုန်ကျစရိတ်, N. , Cinotti, အယ်လ်, Lavenne, အက်ဖ်, et al ။ (2000) ။ လူ့ယောက်ျားအတွက်အမြင်အာရုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများ၏ဦးနှောက်အပြောင်းအလဲနဲ့။ Hum ။ ဦးနှောက် Mapp ။ 11, 162–177. doi: 10.1002/1097-0193(200011)11:3<162::AID-HBM30>3.0.CO;2-A
ရိဒ်, RC, Garo, အက်စ်နှင့်လက်သမား, BN (2011) ။ ယုံကြည်စိတ်ချရမှု, တရားဝင်မှု, ယောက်ျားတစ်ဦးပြင်ပလူနာနမူနာအတွက် Hypersexual အပြုအမူ Inventory ၏ psychometric ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ။ လိင်။ စှဲလမျးသူ။ Compuls ။ 18, 30-51 ။ Doi: 10.1080 / 10720162.2011.555709
Safron, အေ, Barch, ခ, ဘေလီ, JM, Gitelman, DR, Parrish, တီဘီနှင့် Reber, PJ (2007) ။ အာရုံကြောလိင်တူဆက်ဆံသူနဲ့လိင်ကွဲအမျိုးသားများတွင်လိင်စိတ်နိုးထ၏ဆက်နွယ်နေပါသည်။ ပြုမူနေ။ neuroscience ။ 121, 237-248 ။ Doi: 10.1037 / 0735-7044.121.2.237
Schafer, အေ, Schienle, အေနှင့် Vaitl, ဃ (2005) ။ အမြင်အာရုံရွံရှာကြောက် elicitors ဆီသို့ဦးတည်လှုံ့ဆော်မှုအမျိုးအစားနှင့်ဒီဇိုင်းသြဇာလွှမ်းမိုးမှု hemodynamic တုံ့ပြန်မှု။ int ။ ဂျေ Psychophysiol ။ 57, 53-59 ။ Doi: 10.1016 / j.ijpsycho.2005.01.011
Schneider, JP နှင့် Schneider, ခ (1991) ။ လိင်, မုသာနှင့်အပြစ်လွှတ်ခြင်းသည်: စုံတွဲများလိင်စွဲလမ်း မှစ. ကုသမှုတွင်အထဲကပြောဆိုခြင်း။Center ကိုစီးတီး, MN: Hazeldon ထုတ်ဝေရေး။
Seegers ဂျေအေ (2003) ။ ကောလိပ်တက္ကသိုလ်နယ်မြေအပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲရောဂါလက္ခဏာများ၏ပျံ့နှံ့။ လိင်။ စှဲလမျးသူ။ Compuls ။ 10, 247-258 ။ Doi: 10.1080 / 713775413
Stoléru, အက်စ်, Fonteille, V. , ပြောင်းဖူး, C တို့, Joyal, C တို့နှင့် Moulier, V. (2012) ။ ကျန်းမာတဲ့အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများတွင်လိင်စိတ်နိုးထနှင့်အော်ဂဇင်၏ functional neuroimaging လေ့လာမှုများ: တစ်ပြန်လည်သုံးသပ်နှင့် Meta-analysis သည်။ neuroscience ။ Biobehav ။ ဗျာ 36, 1481-1509 ။ Doi: 10.1016 / j.neubiorev.2012.03.006
Tapert, SF, ချောင်, Eh, ဘရောင်း, GG, ဖရန့်, LR, Paulus, အမတ်, Schweinsburg, အေဒီ, et al ။ (2003) ။ အရက်သုံးစွဲခြင်းရောဂါနှင့်အတူဆယ်ကျော်သက်များတွင်အရက်လှုံ့ဆော်မှုမှအာရုံကြောတုံ့ပြန်မှု။ Arch ။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု 60, 727-735 ။ Doi: 10.1001 / archpsyc.60.7.727
Vanderschuren, LJ နှင့် Everitt, BJ (2005) ။ compulsive မူးယစ်ဆေးရှာ၏အမူအကျင့်များနှင့်အာရုံကြောယန္တရားများ။ အီးယူအာရ်။ ဂျေ Pharmacol ။ 526, 77-88 ။ Doi: 10.1016 / j.ejphar.2005.09.037
Voon, V. , မှဲ့, တီဘီ, BANCA, P. , Porter, အယ်လ်, မောရစ်, အယ်လ်, Mitchell က, အက်စ်, et al ။ (2014) ။ အာရုံကြောနှင့်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေမပါဘဲတစ်ဦးချင်းစီအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ cue reactivity ကို၏ဆက်နွယ်နေပါသည်။ PLoS ONE 9: e102419 ။ Doi: 10.1371 / journal.pone.0102419
Weiss, ဃ (2004) ။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌နေထိုင်အထီးလိင်စွဲများတွင်စိတ်ကျရောဂါ၏ပျံ့နှံ့။ လိင်။ စှဲလမျးသူ။ အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သော 11, 57-69 ။ Doi: 10.1080 / 10720160490458247
Zarahn, အီး, Aguirre, G. အနှင့် D'Esposito, M. (1997) ။ fMRI အတွက်စမ်းသပ်မှု -based စမ်းသပ်ဒီဇိုင်း။ Neuroimage 6, 122-138 ။ Doi: 10.1006 / nimg.1997.0279
သော့ချက်စာလုံးများ: ပြproblemနာ hypersexual အပြုအမူ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ, အလုပ်လုပ်တဲ့သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်, dorsolateral prefrontal cortex, hemodynamic တုံ့ပြန်မှု
ကိုးကားစရာ - Seok JW နှင့် Sohn JH (၂၀၁၅) လိင်ဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ၏အာရုံကြောအလွှာများသည်တစ် ဦး ချင်းပြသနာများသောလိင်ဆက်ဆံခြင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ။တပ်ဦး။ ပြုမူနေ။ neuroscience။ 9: 321 ။ Doi: 10.3389 / fnbeh.2015.00321
လက်ခံရရှိ: 18 ဇွန် 2015; လက်ခံခဲ့သည်: 10 နိုဝင်ဘာ 2015;
ထုတ်ဝေသည် - နိုဝင်ဘာ ၃၀ ရက် ၂၀၁၅ ။
Morten အယ်လ် Kringelbachအောက်စဖို့, ဗြိတိန်နှင့် Aarhus တက္ကသိုလ်မှတက္ကသိုလ်, ဒိန်းမတ်, ဗြိတိန်
ဿိအမှတ်တံဆိပ်တက္ကသိုလ် Duisburg-အက်ဆင်း, ဂျာမနီ
Janniko Georgiadisတက္ကသိုလ် Medical Center မှ Groningen က, နယ်သာလန်
မူပိုင်ခွင့်© 2015 Seok နှင့် Sohn ။ ၎င်းသည်စည်းကမ်းချက်များအရဖြန့်ဝေထားသည့်ပွင့်လင်းမြင်သာသည့်ဆောင်းပါးဖြစ်သည် ကို Creative Commons Attribution လိုင်စင် (CC ကို BY)။ သည်အခြားဖိုရမ်များအတွက်အသုံးပြုခြင်း, ဖြန့်ဖြူးသို့မဟုတ်မျိုးပွားခွင့်ပြု၏, မူရင်းစာရေးဆရာ (s) သို့မဟုတ်လိုင်စင်ထုတ်ပေးပေးအပ်အသိအမှတ်ပြုကြသည်နှင့်ဤဂျာနယ်အတွက်မူရင်းထုတ်ဝေကိုးကားကြောင်း, လက်ခံပညာသင်နှစ်အလေ့အကျင့်များနှင့်အညီ။ အဘယ်သူမျှမသုံးစွဲခြင်း, ဖြန့်ဖြူးသို့မဟုတ်မျိုးပွားဤဝေါဟာရများနှင့်အတူလိုက်လျောမခွင့်ပြုထားပါသည်။
* စာပေးစာယူ - Jin-Hun Sohn, [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]